Blog Reader: [မြွေပွေးဘစီ] 25 New Entries: No Select No Copy
န်တာကတော့ ကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်ချစ်နေရတဲ့ "နန်း" ပါပဲ သူကိုတော့နောက်ဆုံးဘိတ်အိတ်
"ဟေ့ နန်း ဘာတွေလုပ်နေလဲ ထ္မင်းစားပြီးပြီလား"
"ဟာ နင်ကလဲ ငါလဲ နင့်ကိုတွေချင်ဇောနဲ့အချိန်မကြည့်ပဲ မေးလိုက်မိတာပါဟာ"
"အေးပါ ကျော်လင်းရယ် ငါကလဲ နင့်ကို တမင်သက်သက်နောက်လိုက်တာပါ"
ဒါနဲ့ နင့်ကို ငါပြောစရာရှိလို့ လာခဲ့တာ "နန်း" ရဲ့ 
"ဟ" အထူးအစန်းပါလား မသာကောင်ရဲ့  ဘာများတုံးလုပ်ပါအုံး
"မနောက်ပါနဲ့"နန်း" ရယ်ငါအတည်ပြောနေတာမနက်ဖန်သွားရတော့မယ်သင်တန်းကစက်မောင်း
ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းခွဲလဲရမှာဟ ငါ့အမေလဲ သဘောတူတယ်ဟ "နင်ကော သဘောတူလားဟင်"
"ဟဲ့ မသာကောင်ရဲ့  ငါကနင်ကို ဘာလို့ သဘောမတူရမှာလဲ နင့်အလုပ်နင်လုပ်မဲ့ဟာကို"
"မဟုတ်သေးဘူးလေ "နန်း"ရယ် နည်းနည်းပါးပါးများ စိတ်ပူပြီးတားမလားလို့ ပေါ့ဟ"
"အေးလေ ပူတယ် ဘာဖြစ်လဲ"
"ဟာ !!!!!!!!!!!! ဒါဆိုသေချာပြီ"
"ဘာသေချာတာလဲ ကျော်လင်းရဲ့  နင်ပေါက်ကရတွေ လိုက်လျှောက်မတွေနဲ့ နော်"
သေချာပါတယ် "နန်း" ရယ် နင့်ငါ့ကိုမခွဲ နိုင်ဘူး မဟုတ်လား
"လဲသေလိုက်ပါလားကောင်စုတ်ရဲ့  နင့်ကို ငါကဘာလို့ မခွဲနိုင်ရမှာလဲ ငါကဘောဒါအကန့် နဲ့ 
သူကိုမှ မခွဲ နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး "
"နင့်မှာချစ်သူရှိတယ် ဟုတ်လား နန်း "
"အေးနင်သိအောင် ငါပြောလိုက်မယ် ငါ့မှာချစ်သူရှိတယ် ငါနဲ့ ငါ့ချစ်သူမကြာခင်လက်ထပ်တော့
မှာ ငါတို့ မင်္ဂလာဆောင်ကြရင်လဲ ခွင့်ယူပြီးပြန်လာခဲ့အုံးပေါ့"
"တော်ပါတော့ "နန်း" ရယ် ဆက်မကြားပါရစေနဲ့ တော့ ငါ့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါတော့ဟာ"
ကံမကုန်ရင်တော့ ငါတို့ ပြန်ဆုံကြတာပေါ့ဟာ"
"အေးလေး ငါလဲ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးနင်သိရအောင်ပြောပြလိုက်တာပါ နင်လဲ နင့်ဘ၀အတွက်
"အိုကေလေ "နန်း" နင့်ကို ငါတခါတည်းနုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဟာ နင်တို့ မင်္ဂလာဆောင်ကြရင် ငါ
"အေးပါဟယ် နောက်တော့ပြန်တွေ့ ကြတာပေါ့"
"ဟဲ့သား ထတော့လေ ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲ သင်တန်းသွားရအုံးမယ်မဟုတ်လား"
"ဘယ် အချိန်ရှိပြီလဲ မလုပ်နဲ့ ဟိုမှာ စခန်းမူးလှမ်းခေါ်နေပြီ သွားတွေ့ လိုက်အုံး"
"ဟုတ်လား အမေ ဒါဆိုသားသွားတွေ့ မှဖြစ်မှာပေါ့"
"ထထ မြန်မြန်လုပ်ပြီး စခန်းမူးနဲ့ သွားတွေ့ လိုက်အုံး"
"ကျော်လင်း ရောက်ပြီလား ဒီနေ့(၁း၀၀) နာရီမှာ စပြီး ခရီးထွက်ရမယ် လိုအပ်မဲ့ ပစ္စည်းတွေ
"ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ ကျွန်တော် အဆင်သင့် ထဲ့ထားပြီးပါပြီ"
"ရော ဒီမှာပိုက်ဆံ တစ်သောင်းခွဲ မင်းသွားရမှာက မိတ္ထီလာ စခန်းနံပတ် (၂၅) အဲ့ဒိရောက်ရင် အခု
"ကောင်းပါပြီဆရာ ကျွန်တော့ကို သွားခွင့်ပြုပါအုံး"
"အေးသား အမေဒီမှာ ငါသားသွားရင်ထဲ့သွားဖို့ပုဇွန်ခြောက်ကြော်လေးကြော်ပေးနေတာတာ"
"သားတစ်နာရီထိုးတာနဲ့ ထွက်ရမယ် အဲ့ဒါ အခုပစ္စည်းတွေလာယူတာ အမေ"
"အကုန်ယူသွားပါသားရယ် ငါ့သားပိုက်ဆံ အမေ မသုံး ရက်ပါဘူး"
"ဒီလိုတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ အမေရာ အမေတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ရမှာ ပိုက်ဆံရှိမှဖြစ်မှာပေါ့
ယူထားလိုက်ပါ အမေ ရာ သားမရှိတုံး အမေ့ ကျမ္မာရေးကိုလဲ ဂရုစိုက်အုံ"
မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်သစ်က လူရွင်တော် ဇာဂနာကို အကြောင်းပြချက် မပေးဘဲ စစ်အစိုးရကထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးထားသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွန် စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေလေ့လာရေးကောင်စီ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ် မစ္စတာ Tomas Ojea Quintana က "အခုချိန်အထိ သူ့ကိုဘယ်မှာ ဖမ်းထားတယ် ဆိုတာ မသိရသေးတာကြောင့် ကျနော်အနေနဲ့ အလွန်စိုးရိမ်ပါတယ်" ဟု သတင်းဌာနများကို ပြောသည်။
ကိုဇာဂနာအား ဖမ်းဆီးထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ဖမ်းထားသည်ကို စစ်အစိုးရက ရှင်းပြပေးရန် ၎င်းက တောင်းဆိုထားသည်။
မစ္စတာ Tomas Ojea Quintana သည် မစ္စတာပီညဲရိုး၏တာဝန်ကို လွှဲပြောင်းယူအပြီး ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လူအခွင့်အရေးအခြေအနေကို လေ့လာစုံစမ်းရန် စာမျက်နှာ ၁၆မျက်နှာ ပါသည့် အစီရင်ခံစာကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။
၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးပြီး အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် အစရှိသည့်အချက်များကို တောင်းဆိုထားသော်လည်း လူရွှင်တော်ဇာဂနာအဖမ်းခံရသည့် အကြောင်းအရာ မပါဝင်ခဲ့ကြောင်း အေပီသတင်းတရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစုဝင်တဦးက "အခုချိန်ထိဘာအကြောင်းမှမသိရသေးဘူး။ ဖမ်းတုန်းကလည်း ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ် ဆိုတာ ပြောမသွားဘူး" ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အာဏာပိုင်များက ကိုဇာဂနာ၏ မိသားစုဝင်များကို ပြည်ပမီဒီယာများနှင့် အင်တာဗျူးမလုပ်ရန်၊ ပြုလုပ်ပါက ဖမ်းဆီးနိုင် ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုကြောင်းလည်း သိရသည်။
သတင်းဌာနများ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကိုဇာဂနာ၏ မိဘများနေအိမ်ရှိ တယ်လီဖုန်းလိုင်းကိုလည်း ယမန်နေ့ကစ၍ အာဏာပိုင်တို့က ဖြတ်တောက်ထားကြောင်း သိရသည်။
လူရွှင်တော် ဇာဂနာကို ယခုလ ၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ၎င်း၏ နေအိမ်တွင် အာဏာပိုင်များက ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးစဉ် လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း မှတ်တမ်း ဗီစီဒီဓာတ်ပြား၊ ရမ်ဘို အပိုင်း ၄ ရုပ်ရှင် စီဒီ၊ စိန်စီသောည စီဒီ ဓာတ်ပြား၊ ကွန်ပျူတာ Hard Disk တခု၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နှင့် အက်ဖ်အီးစီ ၃၀ တို့ကို သိမ်းဆည်းသွားခဲ့သည်။
ကိုဇာဂနာသည် မေလ ၃ ရက် နာဂစ် မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး ၄ ရက်ကြာကစတင်၍ လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ကို တခြားသော အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး၍ တလခန့် အကြာတွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၄၀၀ ကျော်တို့နှင့်အတူ လေဘေး ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ ဖမ်းဆီးမခံရမီ အချိန်အထိ ပူးတွဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးပြက်လုံးများနှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် လူရွှင်တော် ဇာဂနာသည် အာဏာပိုင်တို့၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ကြိမ်ဖန် များစွာခံခဲ့ရသည့်အပြင် အနုပညာလုပ်ငန်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ် မေလကတည်းက အကန့်အသတ်မရှိ အပိတ်ခံထားရသူ ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဧရာဝတီ
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး စေတနာဝန်ထမ်း ဇာဂနာ ဖမ်းဆီးခံရ
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဘေး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် လူရွှင်တော် ဇာဂနာခေါ် ကိုသူရကို ယမန်နေ့ည၌ အာဏာပိုင်များက ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်းရှိ ရှမ်းကုန်းလမ်း နေအိမ်မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု မိသားစုဝင်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက "ညက (၇) နာရီ (၄၅) လောက်မှာ အက်စ်ဘီရယ်၊ စရဖ ခေါ်လားမသိဘူး၊ ခရိုင်မှူး ဦးဆောင်ပြီး လာတာပဲ။ လာပြီးတော့ ရှာမယ်တဲ့၊ နာဂစ်ကို လုပ်တာနဲ့ မပတ်သက်ပါဘူးတဲ့၊ အဲဒီအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်တဲ့။ အဲဒါဆို ရှာပါလို့ ကိုသူရက ပြောတော့ ကိုသူရ အခန်းထဲရှာတယ်။ နောက် သူတို့ဖုန်းတွေ ၀င်ဝင်လာတယ်၊ အဘဆိုတာနဲ့ သူတို့ စကား ပြောပြီးတော့မှ ည (၁၀) နာရီလောက်မှာ ခေါ်သွားရမယ်တဲ့၊ (၂) ရက် လောက်ပါပဲတဲ့၊
အ၀တ်အစား ထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်၊ ဘယ်ခေါ်သွားမလဲ မပြောဘူး" ဟု ပြောသည်။
အာဏာပိုင်များက ဇာဂနာ၏ နေအိမ်မှ စိန်စီသောည၊ ရမ်ဘို အပိုင်း (၄)၊ နာဂစ်ဘ၀ဆိုးညများ၊ နာဂစ်သီချင်း စီဒီများနှင့် စာရင်း စာအုပ် (၂) အုပ်၊ တယ်လီဖုန်းဖိုးအတွက် ပြင်ဆင်ထားသည့် အက်ဖ်အီးစီ (၃၀)၊ ဒေါ်လာ (၁၀၀၀) နှင့် ကွန်ပျူတာ system box တခု တို့ကို သိမ်းယူသွား သည်ဟု သိရသည်။
လူရွှင်တော် ဇာဂနာသည် ဦးအောင်လွင်၊ ငှက်ပျောကျော်၊ အရိုင်း၊ ညှောင်ညှောင် စသည့် အနုပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ မုန်တိုင်းဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များထံ အစားအစာနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်များ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် အကူအညီပေးနေသူဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းကမှ ဧရာဝတီတိုင်း ဖျာပုံမြို့နယ် မိန်းမလှကျွန်းဘက်ရှိ ချောင်းရိုးတလျှောက်ရှိ အကူ အညီမရဘဲ ဖြစ်နေသည့် ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးပြီး ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဇာဂနာသည် ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရောက်လာပြီးနောက် ၎င်းမြင်တွေ့ခဲ့ရသော လေဘေးဒဏ်ခံနေရ သည့် ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ဒုက္ခအခက်အခဲများ အပါအ၀င် စစ်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများ လူထုထံ မရောက်ရှိပုံတို့ကို ပြည်ပမီဒီယာများမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ သူဖြစ်သည်။
ဇာဂနာ ဖမ်းဆီးခံရသဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ရပုံကို မိသားစုဝင်တဦးက "ကိုသူရရဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး အလုပ်တွေအားလုံး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကုန်တယ်။ သူ့ကို လာလှူမယ့်လူတွေက စောင့်နေ၊ သူလာလှူမယ်ဆိုလို့ စောင့်နေတဲ့လူတွေက စောင့်နေနဲ့ ကျမတို့လည်း ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတယ်" ဟု ပြောသည်။
ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာအရေးအခင်းကာလကလည်း သပိတ်မှောက်သံဃာတော်များကို ဆွမ်းကပ် လှူဒါန်းခဲ့ သဖြင့် ဇာဂနာကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားဟောင်း ဇာဂနာသည် ရုပ်ရှင်၊ သဘင်၊ ဂီတ၊ စာပေတို့တွင် ဘက်စုံထူးချွန်သည့် စွယ်စုံရ အနုပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရက ၎င်းအား အနုပညာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိတ်ပင် ထားသည်။ ။ ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်မှဖေါ်ပြသည်
အသဲကွဲ မြို့  တော်မှာ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒါဏ် တစ်နှစ်ခွဲ
သင်တန်းဘယ်သူသွားမလဲ "ဟေ့" လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်ဝန်ကြီးဌာနက စ
ဟုတ်ပါ့မလား ငါ့ကောင်ရမင်း အမေကိုမေးအုံးကွာ တော်တော်ကြာ ငါကလွတ်လိုက်ရင်
ငါမကောင်းဘူးဖြစ်နေအုံး မယ် သွားသွား မင်းအမေကိုသွားတိုင်ပင်လိုက်အုံး။။။။။။။။။။။
ရပါတယ်ဆရာ ကျွန်တော့အမေကို ကျွန်တော်ပြောလို့ ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ လဲ ပိုက်
ဆံလိုနေတာပဲ နောက်နှစ်ကျောင်းတတ်ဖို့ ကျွန်တော်မှာပိုက်မရှိလို့ ပါ အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်
တော့ကိုသွားခွင့်ပြုပါဆရာ ဆရာပေးမယ်ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံ တစ်သောင်က ကျွန်တော်တို့ 
သားအမိ အဖို့ အတော်ကို မက်လောက်စရာဖြစ်နေလို့ ပါဆရာ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
အေးဒါဆိုလဲ ပြန်ပြောပြလိုက်ပေါ့ နောက်နေ့ ကြရင်ခရီးထွက်ရမယ် မိတ္တထီလာမှာသင်
အေးလေ တားမရတော့လဲ သွားပေါ့ ငါကတော့ပိုက်ဆံပေးမှာအမှန်ပဲ မင်းလဲအဆင်ပြေ
"ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" "ကျွန်တော့ကို ပြန်ခွင့်ပြုပါအုံးဆရာ" အမေနဲ့ 
အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်လည်း အိမ်ပြန်လမ်းအတိုင်း လျှောက်ပြန်လာခဲ့တယ် လမ်းမှာ ကျွန်တ
ခုစဉ်းစားကြည့်မိတယ် "ငါဘာလို့ သင်တန်းသွားဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ရတာလဲ ပြီးတော့ဘာ
ဘာမှမဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူးလေ ငါသင်တန်းသွားရင်ပိုက်ဆံရမှာပဲ တစ်သောင်းခွဲတောင်
ရမှာ ငါတို့ မိသားစုမှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ ငွေတစ်သောင်းခွဲကို မြင်ရတော့မှာပဲလေ ငါ့
အဲ့လိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အိမ်နားပြန်ရောက်ခဲ့တယ်...................................................
"အမေ ရေ အမေ" အမေဘယ်နားမှာလဲ ဒီကိုလာပါအုံး သားပြောစရာရှိလို့ ..................
"ဟဲ့သား ဘာဖြစ်လာရတာတုံး အမေ့ကိုပြောစမ်း အမေရင်တွေတုံလိုက်တာ သားရယ်"
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး အမေရ သားပြောစရာရှိလို့အမေ့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တာ~~~~~~~~
ပြောစမ်းပါသားရဲ့  အမေသိချင်လှပြီဘာတွေဖြစ်လို့ တုံး အမေ့ကို ရောဂါတိုးအောင်တော့
မလုပ်ပါနဲ့ သားရယ်~~~"မလုပ်ပါဘူး အမေရ" ဒီလိုပါ စခန်းမှူးကပြောလိုက်တယ်သား
သင်တန်းသွားရမယ်တဲ့ပိုက်ဆံတစ်သောင်းခွဲတောင်ရမှာ အမေရ ဘာမှလဲ မကြာဘူးတဲ့
"သားသွားမယ်နော် အမေ" ငါ့သားစဉ်စားပါအုံး ဘယ်နေရာလဲဆိုတာ အမေသိတယ်
သား လူကြီးတွေတောင် မသွားချင်လို့လုပ်နေကြတာ ငါ့သားကသွားမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်
ပါ့မလား သားရယ်။ "ရပါတယ် အမေရ" သားနေတတ်ပါတယ် သိပ့်မှ မကြာတာ သုံးလေး
လပဲတဲ့ "ဘယ်ကလာ သုံးလေးလလဲ" နှစ်နဲ့ ချီပြီးကြာတာသားရဲ့  အဲ့ဒါတွေ မင်းမသိပဲဘာ
သွားလုပ်မှာလဲ သွားမနေပါနဲ့ သားရယ်~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အမေရယ် သွားပါရစေ သားတို့ မှာ ပိုက်ဆံတစ်သောင်းဆိုတာ တခါမှကို မမြင်ခဲ့ဘူးတာေ
လ ဒီတစ်ခါတော့ သွားခွင့်ပြုပါအမေ "အမေလဲ ပိုက်ဆံသုံးရတာပေါ့" သားကြိုးစားပါ့မယ်
"အမေကတော့ ပိုက်ဆံကို မလိုချင်ဘူး ဒါပေမဲ့ တားမရလဲ လွတ်ပေးရမှာပေါ့ မင်းကင်္ယျေား
လေးပဲ ငါဘယ်တားလို့ရမလဲ ကိုယ်ဟာကိုတာ ကြည့်နေပေါ့ ဘုရားတရားလဲ မမေ့နဲ့ ရတ
နာသုံးပါကို အမြဲ ဆည်းကပ် အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ မင်းဘေးမရောက်နိုင်ပါဘူး~~~~~~~~~~
"သားနားထောင်ပါ့မယ် အမေ သားကိုသွားခွင့်ပြုရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ" သားကိုပစ္စည်း
တွေထဲ့ထားပေးအုံး အမေ သားသူငယ်ချင်းတွေသွား နုတ်ဆက်လိုက်အုံးမယ် အမေ။။။။။။။။။
"အေးအေး အမေ ကြည့်ထဲ့ထားလိုက်မယ် မင်းဘယ်နေ့ သွားမှာလဲ"
"မနက်ဖန် သွားမယ်အမေ" "အေးလေ အမေကြည့်ထဲ့ထားလိုက်ပါမယ်"
ဆက်ရန်ရှိသည် ဘယ်အချိန်လဲတော့ တိဘူး :P
ကျွန်တော်ဟာငယ်ငယ်ကလေး ကတည်းက အဖိုးတွေ အဖွားတွေနဲ့ နေခဲ့တာပါ အသက်ပြည့်လို
တနေ့ တနေ့ ဆုံးမလိုက်တာလဲမပြောနေနဲ့ တော့ နားကိုမဆံ့တော့တာ သူများပစ္စည်းမခိုးရ-ရန်မ
ဖြစ်ရ ဘုရားတရားလဲမမေ့နဲ့ ပေါ့ သူများကိုလဲသွားပြီး အနာတရဖြစ်အောင် ထိခိုက်အောင်မလုပ်
ရဒါတွေနဲ့ ပဲ နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှဆုံးမနေတာ ကြာလာတော့ ဆုံးမတာမထင်တော့ဘူး ဒီအဖိုကြီးအဖွား
ကြီးလေ အလကားရတိုင်းပြောနေတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာခံစားလာရတယ် :P ဘယ်လိုထင်ထင် သူ
တို့ ကတော့ဂရုမစိုက်ရေးချ မစိုက်ပဲ ဆုံးမမြဲဆုံးမနေတာပဲ တဖြေးဖြေးနဲ့ စကားတွေကနားရေ၀
လာတယ် အသက်ကလေးလည်း ဆယ့်လေး ဆယ့်ငါးလောက်လဲရောက်ကော စဉ်စားတတ်လာ
ပြီ သူတို့ ပြောပြနေတာတွေက တကယ်လို အပ်ပါလားဆိုတာကို နားလည်လာတယ်~~~~~~~
ကြော်ငြာဝင်လိုက်အုံးမယ် ကျွန်တော်က ရွာသားဗျ ကျွန်တော်ရှစ်တန်းနှစ်လောက်မှာ သူငယ်ချင်း
တစ်ယောက်ရခဲ့တယ် တော်တော်ကိုခင်ကြတာ ဒါပေမဲ့ စရိုက်ချင်းက မတူဘူး သူကနည်းနည်းစ
ရိုက်ဆိုးတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကြွားတာတော့မဟုတ်ဘူး :P ကျွန်တော့သူငယ်ချင်နဲ့ညီအကိုလဲခင်
လာရောတစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပြောကြမေးကြတာပေါ့ အဲ့ချိန်မှာ ကျွန်တော်သူ့ အ
ကြောင်းသိရတာက သူဟာ ပိုက်ဆံရှိ အသိုင်းဝိုင်းကဆင်းသက်လာပြီး သူ့ အဖေက ဗိုလ်မှူးတစ်
ယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ အမေကတော့ ရုံးဝန်ထမ်းတော့ ရုံးဝန်ထမ်းပဲ ဘာရုံးကိုဝန်ထမ်းတာလဲတော
့မမှတ်မိတော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့ ခင်လာတဲ့တလျှောက်လုံးမှာသူ့ မှာပိုက်ဆံပြတ်သွားတယ်လို့ မရှိ
ဘူး (၉၀)တန်တွေကို ပလူပျံနေတာပဲ ကျွန်တော့ကိုလဲ အမြဲတမ်းပေးသုံးပါတယ် အမှန်တိုင်းေ
ပြာရရင် သူ့ ကို အားကျမိခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့ မှာက တစ်နေ့ လုပ်မှ တစ်နေ့ စားရတာလေ ဘယ်
ကလာသူ့ လိုသုံးစွဲနိုင်မှာလဲ(၉၀) တန်ကိုင်နိုင်ဖို့ နေသာသာ ပြား(၅၀)တန်ကိုင်ဖို့ ကို အသည်းအ
သန်လုပ်နေရတယ်~~~~တစ်နေ့ တော့ သူ့ ကို အားကျပြီး အိမ်မှာ (အဖိုးနဲ့ အဖွား) မှာ ပိုက်ဆံ
လိမ်တောင်းကြည့်လိုက်တယ်ကျောင်းမှာအလှူလုပ်မှာမို့ လို့ ပိုက်ဆံထဲ့ရမယ် ဘာညာပေါ့ အဖိုး
နဲ့ အဖွားလည်းတကယ်အောက်မေ့ပြီး ငါ့သားဘယ်လောက်တောင်လို လို့ လဲ ပြောလေ မေတို့ 
ချင်း ပြီးတော့ သူ့ ရဲ့ ကိုးဆယ်တန်ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မပြောရဲ ပြောရဲ နဲ့ ပြောချလိုက်တယ်
(၉၀)လိုပါ၏လို့အဖိုးနဲ့ အဖွားလည်း မျက်လုံးပြူးကုန်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ သူတို့ မျက်လုံးပြူးတာကြာ
ရှည်မပြူးလိုက်ရပါဘူးလင်မယားနှစ်ယောက် တီးတိုး တီးတိုး နဲ့ အခန်းထဲဝင်သွားကြတယ် ဘာ
တွေလုပ်လဲတော့သိဘူး :Pကျွန်တော်လည်း လူငယ်ပီပီ စူးစမ်းဆိုတာကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး စပ်စု
ရန်နောက်ကလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒိမှာစတွေ့ တာပဲ အဘိုးကြီးနဲ့ အဖွားကြီး ကုတ်ချောင်း
ကုတ်ချောင်းနဲ့ စုထားဆောင်းထားတာလေးတွေလိုက်စုနေတာတွေ့ လိုက်ရတယ် ကျွန်တော်လ
ည်းတော်တော်သနားသွားတယ် သနားတော့ကော ဘာတတ်နိုင်တော့မှာလဲ စကားကလွန်သွားပြီ
ကို ကျွန်တော်လည်းဆက်မကြည့်တော့ပဲ ချောင်းနေတဲ့အလုပ်ကိုရပ်အိမ်ရှေ့  မှာသွားထိုင်နေလ
ပြီးတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်လို ကျွန်တော့ကို စကားစပြောကြတယ်လူလေးရယ်မေတို့
မှာလဲ ငါ့မြေးတောင်းတဲ့ (၉၀)တော့မရှိဘူး ဒီမှာ အကုန်းလုံးပေါင်းမှ (၄၇) ကျပ်ပဲရှိပါတယ်ကွယ်
ဒါလေးပဲယူပါလို့ သားဆရာမကိုပြောပြပေးပါကွယ်တဲ့ ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲကြိတ်ပြုံးနေတာ
ပေါ့လက်လည်းပိုက်ဆံဆီကိုအရောက် ပါးစပ်ကလည်းပြောလိုက်သေးတယ် (၄၇)ကျပ်ဆိုတော်
တော်ပြောပြမှရမှာလို့ပေးပေးကြည့်မယ်မရဘူးဆိုရင်တော့သားလည်း မသိဘူးနော်ဆိုပြီး ပြန်
လို့ တောင် ချိန်းခြောက်လိုက်သေးတယ်~~~~~~အဖိုးနဲ့ အဖွားလည်း "အေးပါကွယ် ရအောင်
သာပြောပေးပါလူးလေရယ်" လူလေးရဲ့ ပညာရေးလဲရှိသေးတော့သူတို့ ကိုကြေနပ်အောင်လုပ်
ပေးရမှာပေါ့ သူတို့ မကြေနပ်လို့ ကျောင်းထုတ်လိုက်ရင်အဖိုးတို့ လိုပဲ လယ်တဲချောင်းထဲမှာ သူ
များခိုင်းတာလုပ်ရမှာဆိုးလို့ ပါကွယ်~~~~~~~~~~~~ကျွန်တော်လည်း အင်းပေါင်း မြောက်
များစွာလုပ်ပြီး ပိုက်ဆံ (၄၇)ကျပ်ကိုယူလိုက်တော့တယ်~~~နောက်နေ့ ကျောင်းသွားတော့
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းနဲ့ ကျောင်းထိပ် ကွမ်းယာဆိုင်မှာတွေ့ တယ် ပိုက်ဆံ(၄၇)ကျပ်ဆိုတာ
ကလဲ တစ်ခါမှ မကိုင်ဘူးတော့ သူငယ်ချင်းကိုဖွင့်ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုဘယ်ပုံရလာတယ်
ဆိုတာကို ဒီကောင်မမေးတဲ့အပြင် ဆေးလိပ်တောင် သောက်မပျက်ဘူး အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော့သူ
ငယ်ချင်းက ဒါဆိုအတော်ပဲငါ့မှာ ပိုက် ငါးဆယ် ပါတယ် ငါတို့ နှစ်ယောက်ကျောင်းပြေးရအော
င်တဲ့ ကျွန်တော်လည်း ရင်တွေတုံနေတာနဲ့ အေးကောင်းသားပဲလစ်စို့ ဆိုပြီး ပြေကြပါလေရော
ကျောင်းတာပြေးတယ် ဘယ်ကိုသွားရမှန်းကျွန်တော်မသိပါ သူငယ်ချင်းခေါ်ရာကိုလိုက်နေရ
တယ် အဲ့နေ့ က သူ့ မှာ ဆိုင်ကယ်ပါတယ် သူမောင်းရာနောက်ကို တကောက်ကောက်လိုက်ေ
နရတယ် ပထမဦးဆုံ ၀င်တာက ခေါင်ရည်ဆိုင် ခက်တည်တည်ပဲ သူကခေါင်ရည်ဆိုင်ထဲမှာဝင်
သွားပြီးသောက်နေတာကျွန်တော်လည်း အပြင်မှာ မစောင့်နေနိုင်တာနဲ့အထဲကိုလိုက်ဝင်သွား
ပြီးထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ် ကိုယ်တော်ချောကတော်တော်ကို ဇိမ်ရနေတာ ကျွန်တော့မှာအံသြ
လို့ ကိုမဆုံးဘူး ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ဒီလိုခေါင်ရည် သောက်နေတာ ရောင်းတဲ့လူကလဲ
ရောင်းနေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ထင်ထားတာက ကျောင်းသားခေါင်ရည်မသောက်ရ ဥပဒေ
ရှိတယ်အောင့်မေ့နေတာတော်တော်သောက်နိုင်တဲ့ကောင်ပဲ ဒီလောက်သောက်တာတောင် ဘာမှ
မတစ်ခွက်စမ်းသောက်လိုက်ပြီ "အား"လည်ချောင်းထဲကိုသံရည်ပူလောင်းထဲ့သလိုပဲ ခံလိုက်ရတ
ယ် ကဲဒီလောက်တောင်ဖြစ်လှတာ ဒုတိယ တစ်ခွက်နည်းနည်းတော့လျှောလျှောရှူရှူဝင်သွားတ
ယ်ခေါင်းထဲမှာလဲရစ်သီရစ်သီနဲ့ ဆိုတော့နည်းနည်းနေလို့ ကောင်းသလိုပဲလမ်းလျှောက်ကြည့်တ
အော်နေတာကြာလာတော့သူငယ်ချင်လုပ်သူလဲ နောက်တနေရာဆက်ချင်တယ်နဲ့ တူပါတယ်ကျ
န်နေတဲ့ လက်ကျန်လေးကိုအကုန်ဖြတ်လိုက်ပြီး "ကဲရှင်းမယ်ဟေ့" ဆိုပြီး ပိုက်ဆံရှင်းလိုက်တယ်
တော်မူးနေပြီကွာ" တနေရာရာ ပို့ ပေးပါ ငါအိပ်ချင်နေပြီအဲ့နောက်တော့သူငယ်ချင်လဲဘယ်ကိုေ
မာင်းလဲမသိတော့ဘူး ဆိုင်းကယ်စီးရင်း လေတိုက်ကိုခံလာလိုက်တာပိုလို့ တောင်မူးသွားတယ်
နောက်တော့ ရပ်ကွက် တခုထဲကို ရောက်သွားတာတော့သိတယ် အဲ့နောက်အိမ်တစ်အိမ်ထဲကို
မှောက်ခုံကြီး ဖြစ်နေရတော့တယ် မျက်လုံးက မဖွင့်နိုင်ဘူး နားကကြားနေရတယ် "တစ်ယော
က်ကို ဘယ်လောက်လဲ" "နှစ်ဆယ်ငါးကျပ်" ဒါဆိုနှစ်ယောက်ယ်မယ်တဲ့ကျွန်တော့သူငယ်ချင်
ပြောနေတာတွေအကုန်ကြားနေရတယ်မိန်းခလေးအသံတွေလဲ ဆူညံနေတယ် ရေမွေးအနံေ
တွကလဲ နာခေါင်းထဲကိုလာကလိနေတယ် အဲ့နောက်တော့မိန်းခလေးတယောက်တွဲပြီးအခန်း
တစ်ခန်းထဲကို တွဲဝင်လာတယ် ကျွန်တော် ပြန်မရုန်းကန်နိုင်ဘူးကျွန်တော့မှာအားအင်တွေမရှိ
တော့ဘူး ထိုမိန်းခလေးသယ်ဆောင်ရာနောက်ကို လိုက်ပါနေခဲ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော့သူင
မက်နေတယ်နာခေါင်းထဲမှာရေမွေးန့ံရယ်အမြင်အာရုံမှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်မှုံဝါးဝါးနဲ့ သူ
ကို ကျွန်တော်တွန်းထုတ်နေမိတယ်ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့လက်တွေလှုပ်မရဘူးအားအင်တွေဘယ်
ရောက်ကုန်ပြီလဲ ကျွန်တော်ထင်တာအိမ်မက်ပဲလေဆိုပြီး အားအင်ကို အတင်းဆုစည်းလိုက်ပြီး
ရုန်းထလိုက်တယ် "ဟာ" အိမ်မက်မဟုတ်ပါလား တကယ့် အဖြစ်အပျက်ဖြစ်နေပါလား ငါဘာ
တွေလျှောက်လုပ်နေတာလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးနေမိတယ် မိန်းခလေးကလဲ ကျွန်တော့ကို
"ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ငြိမ်ငြိမ်နေပါ ပြီးရင် ပြန်ရအုံးမယ်တဲ့" အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အသိတော်
ဒါဆိုငါ့မောင်အရွယ်ပဲပေါ့ ငါ့မောင်က လူပေါင်းမှားသွားတာပဲ နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် စဉ်စဉ်
ချင်ချင် လုပ်ပေါ့ကွယ်နောက်ဆိုဒီလိုနေရာမျိုးကိုဘယ်တော့မှရောက်မလာစေနဲ့ အမတို့ က
၀ါသနာပါလို့ လုပ်စားနေတာမဟုတ်ဘူးငတ်လို့ လုပ်စားနေကြတာဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးရတဲ့ပိုက်ဆံ
မယ်မနက်ကြရင် ပြန်ပေးလိုက်ကြားလားဆိုပြီး ဆုံးမနေတယ် ကျွန်တော်ဘာပြန်တေပြာရမလဲ
ဘာမှလဲပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူး အဲ့ဒါနဲ့ မျက်နှာသွားသစ် နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက် ငါးနာ
ရီထိုးနေပြီ မျက်နှာသစ်ပြီးပြန်လာတော့ဘယ်အချိန်က ဘယ်လိုသွားယူလိုက်လဲမသိဘူး ကော်
ဖီတခွက် မိန်းခလေးလှမ်းပေးတဲ့ကော်ဖီကိုသောက်ရင်း မနက်ဖြန် မိုးလင်းလို့ တွေ့ ရမယ့် အဖိုး
နဲ့ အဖွားရဲ့ မျက်နှာကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲစဉ်းစားရင်~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အမှားနဲ့အမှန်
ကျွန်တော်အခုလွယ်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ကို လွယ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ
လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားချင်တယ်လို့ ပဲပြောချင်တယ် အမှန် နဲ့ 
အမှား ဟာခြစ်ချလိုက်တာလွယ်ပေမဲ့ ဖြစ်လာမဲ့ ဆိုးကျိုတွေကို
စဉ်းစားသင်တယ် ကဲလူတွေ အမှားနဲ့ အမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်ပါစေဗျာ
ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှ မပြောချင်တော့ဘူးဗျာ ဒါပဲလို့ ပဲပြလိုက်ချင်တော့တယ်
ကျွန်တော်တို့ သေလွန်ခဲ့သော် ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်ဘ၀ကို ပြန်သတိရမှာ စိုးလို့မေ့ပင်လို့ ခေါ်တဲ့
အပင်အောက်က ဖြတ်ရတယ်လို့ကြားဘူးတယ် !ဟုတ်လားတော့မသိဘူးလူကြီးသူမတွေပြောတာကြားဘူးထားတာ !
ကဲအဲ့ဒါဆို ကျွန်တော်တို့တတွေ သေလွန်ခဲ့ကြပြီလား မေ့ပင်အောက်ကိုကော ဖြတ်ခဲ့ကြပြီလား ကျွန်တော်တို့ 
တတွေ အတိတ်ကို သတိမရနိုင်တော့ဘူး အတိတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ "ဘာမှမသိချင်ဘူး!" ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲပျော်တယ်
အခုချိန်မှာ ကားတွေစီးရတယ် အစားကောင်းတွေစားရတယ် နေစရာအိမ်တွေ ကောင်းကောင်းရှိနေတယ် အတိတ်ဆို
ဆိုတာ ငါတို့ မှာ မရှိ ! နွားရဲ့  နဖားကြိုးကိုင်တဲ့လက်က ကားရဲ့ စီယာရင်ကို ကိုင်နေရမှတော့ ဘယ်သတိရတော့မလဲ
ဒါဆိုသေချာတယ် ငါတို့ တွေ သေလွန်ခဲ့ကြပြီပဲ "ဟာ" အဲ့ဒါဆိုမေ့ပင်အောက်ကိုဖြတ်ခဲ့ပြီပေါ့ မဟုတ်သေးပါဘူး
မေ့ပင်အောက်ကို ဖြတ်ခဲ့မယ် သေလွန်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် အခုဖြစ်နေတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့  အကြောင်းတွေကို ဘယ်လိုလုပ်သိ
နိုင်မှာလဲ မုန်တိုင်းဝင်လို့လူတွေသေကြေပျက်စီတာကိုကော ဘယ်သိနိုင်မလဲ ငါအခုလိုစာထဲထည့်ရေး နိုင်တယ်
ဆိုကတည်းက ငါမသေသေလို့ ပေါ့ မေ့ပင်အောက်ကိုလည်းမဖြတ်ရသေးဘူးကို။
"တော်ပါသေးရဲ့  ငါသေလွန်ခဲ့ပြီအောက်မေ့နေတာ" မသေသေးဘူး အတိတ်ကိုလလဲ မမေ့သေးဘူးဆိုရင် အခု
ဖြစ်ပျက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကတကယ်ပဲပေါ့ ဒါဆိုငါကလူထဲက လူတယောက်ပဲ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အနေနဲ့ကူညီ
( လူတယောက်က ကျွန်တော့ကို ပြောဘူးတယ် အလှူခံနေမဲ့ အစား ရှိတာလေးကို ရောင်းပြီး လှူလိုက်တာက ပို
ဒါဆို ကျွန်တော်လည်းရှိတာလေး ရောင်းပြီးသာဓုခေါ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ အားလုံးလဲ ကျွန်တော်လို သာဓုခေါ်နိုင်
ကျွန်တော် တခုပြောပြချင်တာက မြန်မာပြည်သားမဟုတ်တဲ့ တရုတ်မ (ကျွန်တော်ဆရာမပေါ့) ကတောင် စိတ်ဝင်
စားပြီးနင်တို့ နင်တို့ နိုင်ငံအတွက် တခုခုလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ပြောကြားလာတော့ ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို
ဖီးလ်ဖြစ်မိတယ်ဗျာ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဦးဆောင်ပြီး အလှူခံပေးနေတယ် အဲ့တော့ဘယ်နေနိုင်တော့မလဲ ကိုယ်
လဲပါရပြီပေါ့ အလှူငွေအရင်ထဲ့ နားလည်အောင်ရှင်းပြပေါ့ အဲ့လိုနဲ့ လုပ်လိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒိကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြော
ချင်တာက တခြားလူမျိုးတွေတောင် စိတ်ဝင်စားပြီ အားကျိုးမာန်တတ်လုပ်ပေးနေတာ ကျွန်တော်တို့ လို မြန်မာနိုင်
ငံသားဖြစ်တဲ့လူတွေက ဘာလို့ မလုပ်ကြရမှာလဲ။ အခုဆိုလူတွေ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်သေကြေပျက်စီးနေ
တာကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ (နအဖ) စစ်အုပ်စုကကော စာရင် အတိအကျပြနိုင်လို့ လား သူတို့ အားခဲထားတဲ့ မေ (၁၀)
နောက်ဆုတ်ပြီး ပြည်သူလူထု ကို ပြန်ကြည့်နေခဲ့လား မေ (၁၀) ကိုလဲနောက်မဆုတ် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူလူ
ထုကိုလဲပြန်လှည့်မကြည့် "ပြန်လှည့်မကြည့်တဲ့အပြင် သောက်ရေရှားလို့ ရေလာခပ်တဲ့ လူတွေစီကတောင် လူစုပြီး
မိုက်ကြေးခွဲ ပိုက်ဆံတောင်းနေကြတာ ဒါသူတို့ ရဲ့  လုပ်ရပ်ကောင်းလား။
စစ်အုပ်စုကိုလဲ မကောင်းဘူးလို့ မပြောပါဘူး ကောင်းတဲ့လူလဲရှိမှာပါ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ တော့ မရမ်းချင်ဘူး
(၁၀)% လောက်တော့ကောင်းမှာပါ သေချာတယ် (၉၀)% ကတော့သောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်တွေ လူလူချင်းဦး
နှောက်ဖေါက်စားနေတဲ့ကောင်တွေပဲ ကိုကိုယ်တိုင်က ဦးနှောက်မရှိပဲ မင်းလုပ်အုပ်ချုပ်ပြီး ဘယ်လာတိုးတတ်ပါမ
လဲ ဒီနိုင်ငံဘယ်နားကလာကောင်းနိုင်ပါ့မလဲ မသိမေးလိုက်ချင်တယ် (၁+၁)ဘာရလဲလို့ ။
ဦးနှောက်မရှိဆိုမှတော့ ခေါင်းကဘယ်ကလာရှိတော့မှာလဲ ဒီကောင်တွေခေါင်းမရှိပဲ ပြန်ဖြေမဲ့အဖြေကို ကျွန်တော်
ကြိုသိနေတယ် (၁+၁) က အာဏာနဲ့ ငွေရတယ်လို့ ဖြေကြလိုက်မယ်သေချာပါတယ်ဗျာ။
နောင်တော်တို့ ရယ် ခင်ဗျားတို့ လဲ လူတွေပဲ အသိဥာဏ်လေးတော့ နည်းနည်းရှိကြမှာပါ နောင်တော်တို့ 
သမိုင်းကို နောင်တော်တို့ လှအောင်ရေးကြပါလား။ ရာထူးနဲ့ ငွေလေးပေးပြီး နောင်တော်တို့ ဦးနှောက်ဖောက်စားခံနေ
တော့မှာလား လူပေါ်လူလို မဆက်ခံတဲ့ ဒီကောင်တွေကို နောင်တော်တို့ လဲမြင်နေကြားနေရတာပဲ နောင်တော်တို့ ရာ
ထူးနဲ့ ငွေကိုမက်ပြီးသူများကြိုးဆွဲရာလိက်ကနေအုံးမယ် ဆိုရင်လူသက်တန်း (၇၅) အများဆုံးပါ အကယ်လို့ များ နောင်
တော်တို့ သေလွန်ခဲ့သော် အသေဖြောင့်ကြပါ့မလား ? သေသွားခဲ့ကြရင်ကော အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ဝိဥာဉ်
နဲ့ ဘယ်လိုမျက်နှာပြကြမလဲ ကမ္ဘာမကြေလို့ဝိဥာဉ်တွေ တွေကစောင့်နေကြတယ် နောင်တော်တို့ ရာထူးနဲ့ ဂုဏ်လေး
ကိုဘေးနားမှာ တစက္ကန့်လောက် ချပြီး လူ့ လောကကြီးထဲကို မျက်စိလေးဖွင်ပြီးကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ
ဆိုတာ နောင်တော်တို့ တွေကြပါလိမ့်မယ် အမှန်တရားကို မြင်လာကြပါလိမ့်မယ် အမှားတစ်ရာလုပ်ခဲ့တာ အပြစ်မဟုတ်
ပါဘူး အမှားတစ်ရာလုပ်ပြီး အမှန်တရား တခုတွေ့ လာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နောင်တော်တို့ ရယ်။
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အန္တိမ ဈာပနအခန်းအနားအစီအစဉ်
စကြ၀ဠာကြီးအတွင်း၌ ကြယ်စုကြီးများ ( Galaxy ) မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် တည်ရှိနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သော နေအဖွဲ့အစည်း ( Solar System ) မှာ များပြားလှသောကြယ်စုကြီးများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သော နဂါးငွေ့တန်းကြယ်စုကြီး
( Milkyway Galaxy ) ၏ အစွန်ဘက်ကျသော အိုရီယွန် လက်တံ ( Orion Arm ) အတွင်း၌ ရှိပေသည်။ Milkyway Galaxy အတွင်း၌ပင် ကျွန်ုပ်တို့ နေအဖွဲ့အစည်းမှာ အမှုန်ကလေး တစ်မှုန်မျှသာ။ သို့ဆိုလျှင်စကြာဝဠာအတွင်းရှိ မြောက်များစွာသော
နေအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သော သက်ရှိများရှိမနေပါဟု ပြောနိုင်ပါမည်လော . . . ။
ဤသို့သောတွေးခေါ်မှုများမှာ ယခုမှရှိသည်သာမဟုတ်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ခန့်က တည်ရှိခဲ့သော ဆူမားရီးယန်း ( Sumerian ) လူမျိုးစုများလက်ထက်ကပင်ရှိခဲ့ပေသည်။ သိပ္ပံပညာထွန်းကားခြင်းမရှိသေးသောထိုခေတ်၏အယူအဆများမှာစိတ်ကူးယဉ်မျှသာဖြစ်
သည်ဟု ယူဆနိုင်သော်လည်း ထူးဆန်းသည်မှာ ၄င်းတို့၏ နေစကြ၀ဠာ ဆိုင်ရာ အယူအဆများမှာ ယနေ့ခေတ် နောက်ဆုံးတွေ့ရှိမှုများထက်ပင် ပြည့်စုံတိကျနေခြင်းပင်။ ဆူမားရီးယန်းတို့၏ ရှေးဟောင်းရုပ်ပုံသမိုင်းအထောက်အထားများအရ ဆီလျော်အောင်ယူဆကြည့်ပါက အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်း ၂၀၀ ခန့်က ကျွန်ုပ်တို့နေအဖွဲ့အစည်းမှာ ယခုကဲ့သို့မဟုတ်ပေ။ နေမှစ၍ စတင်ရေတွက်သော် -
3. တိုင်ရားမက် ( Tiamat )
8. နက်ပကျူး နှင့်
9. ပလူတို ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ယင်းဂြိုလ်များထဲမှ တိုင်ရားမက် ဂြိုလ်ကြီးသည် ယနေ့ကမ္ဘာဂြိုလ်၏ နှစ်ဆမျှရှိပြီး သက်ရှိများလည်း တည်ရှိခဲ့သည်။ ဒိုင်နိုဆော ( Dinosour ) ကဲ့သို့သတ္တ၀ါကြီးများဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်း မားစ် ဂြိုလ်၌လည်း အပင် နှင့် နို့တိုက်သတ္တ၀ါများ ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် အလွန်ဝေးကွာသောအရပ်၌ အိုစီရစ် ( Osiris ) ကြယ်ကြီးကို ဗဟိုပြု၍ ဂြိုလ်များဖြင့်လှည့်ပတ်နေသော နေစကြ၀ဠာ နောက်တစ်ခုလည်းရှိသည်ဟူ၏။ ၄င်းတို့ထဲ၌ နီဘီးရု ( Nibiru ) အမည်ရှိသော ဂြိုလ်ကြီးလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါသော အိုစီရစ် နေအဖွဲအစည်းအတွင်း ဂြိုလ်အချင်းချင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှု ( Cosmic Collapse ) ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၄င်းအရှိန်ကြောင့် နီဘီးရု သည် လမ်းကြောင်းပြောင်းကာ ကျွန်ုပ်တို့နေအဖွဲ့အစည်း အတွင်းသို့ ရောက်လာခဲ့သည်။
ထိုသို့ရောက်ရှိလာရာမှ နီဘီးရု ၏ လများအနက်မှ တစ်စင်းသည် မားစ်ဂြိုလ်နှင့်တိုက်မိပြီး မားစ် ပေါ်မှ သက်ရှိနှင့်အပင်များ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ နီဘီးရုသည် တိုင်ရားမက် နှင့်တိုက်မိပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်ရားမက် မှာလည်း အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု ကွဲထွက်သွားသည်။ ၄င်းအနက် တစ်ခုမှာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်ပြီး လွင့်ထွက်သွားကာ မားစ် နှင့် ဂျူပီတာ အကြားတွင် ဂြိုလ်ပဲ့ခါးပတ်
( Asteroid Belt ) ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကျန်တစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာဂြိုလ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ တိုက်မိမှုကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်၌ ဒိုင်နိုဆောကြီးများ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည်။ နီဘီးရု မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့နေမင်းကြီး၏ ဆွဲငင်အားကို မလွန်ဆန်နိုင်သဖြင့် နေစကြ၀ဠာ၏ ဂြိုလ်ကြီး တစ်လုံးအဖြစ် နေအား နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ လျှင် တစ်ပတ်ကျ ရှည်လျားသော ဘဲဥပုံလမ်းကြောင်းဖြင့် လှည့်ပတ်နေခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် ဆိုမားရီးယန်းတို့၏ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအရ နီဘီးရု သည် ကျွန်ုပ်တို့နေစကြ၀ဠာ ၏ ဒဿမမြောက်ဂြိုလ်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါသော် နီဘီးရု နေစကြ၀ဠာသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် အခေါက်၌ကား သိပ္ပပညာအားဖြင့် အလွန်အဆင့်မြင့်သော ၊ သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ထောင်ချီအသက်ရှည်သော ဂြိုလ်သား ( Alien ) များအား တင်ဆောင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၄င်းတို့မှာ ဆီးရီးယပ်စ် ( Sirius ) နေအဖွဲ့အစည်းမှ ဖြစ်ပြီး အာကာသအတွင်း ဂြိုလ်များကို အာကာသယာဉ်သဖွယ် စီးနင်းကာ သွားလာနေကြသူများ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်၌ ၄င်းတို့အလိုရှိသော သတ္တုပစ္စည်းများ တွေ့ရသည့်အတွက် ၄င်းတို့ထဲမှ အဲနု ( Anu ) ၊ အဲန်လီ ( Enlil ) နှင့် အဲန်ကီ ( Enki ) တို့အား ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဲန်ကင် သည် ၄င်း၏မိဖုရား နင်ဟားဆက်၏ အကူအညီဖြင့် သူတို့၏မျိုးဗီဇ နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော သက်ရှိမျိုးဗီဇတို့ကိုပေါင်းကာဇီဝအင်ဂျင်နီယာအတတ်ဖြင့် မျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းများ၌ ခိုင်းစေရန်ဖြစ်သည်။ ထိုမျိုးနွယ်စုသည်ကား လူသား ( Human Being ) ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကလူသားတို့မှာ အရွယ်အစားကြီးမားပြီး သက်တမ်းမှာလည်း သိန်းဂဏန်းအထိပင် အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော် . . . ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀၀၀ ခန့်အလိုတွင် နီဘီးရု သည် ( Cosmic Collapse ) တစ်ခုနှင့် ထပ်မံကြုံတွေ့ရပြီး မူလလမ်းကြောင်းမှ သွေဖည်ကာ ကမ္ဘာနှင့် အနီးကပ်ဆုံ ပတ်လမ်းမှ ၀င်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုအခါ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နီဘီးရု ၏ ဆွဲအားကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ပါသော ရေလွှမ်းမိုးမှုဟု ယူဆနိုင်ပေသည်။ နီဘီးရု မှာလည်း ဂြိုလ်ပဲ့ခါးပတ်ကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ရ၍ ကိုယ်ပိုင်လတစ်စင် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ ထို လ မှာ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကြောင့် ကမ္ဘာ၏အရံလအဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ထို လ ရောက်ရှိလာသောကြောင့် ကမ္ဘာ့လေထု၌ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်ကာ လူ့သက်တမ်းလည်း တဖြည်းဖြည်း တိုလာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း၌ အဲန်ကီတို့၏မျိုးနွယ်စုများမှာ လူသားမျိုးနွယ်စုများနှင့်ပေါင်းဖက်မိကာ ကပြား မျိုးနွယ်များဖြစ်လာခဲ့ပြီး မြိုပြနိုင်ငံများတည်ထောင်၍ အချင်းချင်းစစ်မက်များလည်း ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နီဘီးရု နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာချိန် ခရစ်မပေါ်မီ ၆၃၉ တွင် အဲန်ကီမျိုးနွယ်စုများသည် ဂြိုလ်ကြီးနှင့်အတူ ဤကမ္ဘာမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြသည်။ ထို့ကြောင့် နီဘီးရု နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာချိန်၌ အဲန်ကီတို့၏မျိုးနွယ်စုများလည်း လိုက်ပါလာကြတော့မည်ဖြစ်သည်။
မျက်မှောက်ခေတ်တွေ့ရှိချက်များမှာလည်း ဆူမားရီးယန်း တို့၏ မှတ်တမ်းများကို ထောက်ခံနေသကဲ့သို့ ရှိနေသည်။ ၂၀၀၅ ခု ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့ နာဆာအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချကတွင် ပလူတိုဂြိုလ်၏ အပြင်ဘက်၌ Planet X ဟု ယာယီအမည်ပေးထားသော ဂြိုလ်တစ်လုံးကိုတွေ့ရကြောင်းနှင့် ၄င်းသည် နေနှင့်ကမ္ဘာအကွာအဝေး၏ ၉၇ ဆ ကျော်ကွာဝေးသောနေရာတွင်တည်ရှိပြီး နေကိုဘဲဥပုံလမ်းကြောင်းဖြင့်လှည့်ပတ်လျက်ရှိသည် ဟုပါရှိသည်။အဆိုပါဂြိုလ်သည် ဆူမားရီးယန်း တို့၏ သမိုင်းလာ နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ လျှင်တစ်ကြိမ်ကျ နေကို လှည့်ပတ်လျက်ရှိသော နီဘီးရု ဂြိုလ်ကြီးဖြစ်ခဲ့လျှင်ကား . . . . ။
ဂြိုလ်သားများ ပါလာမည် ၊ မပါလာမည်ကို အသာထား၍ ဒြပ်ထုအားဖြင့် ကြီးများလှသည့် ဂြိုလ်ကြီးတစ်လုံး ကမ္ဘာကြီးအနီးသို့ ချဉ်းကပ်လာသည်ဟုသာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လ ၊ နေ နှင့် နီဘီးရု တို့၏ဆွဲအားများကြောင့် ကမ္ဘာကြီးမှာ အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးရပေမည်။ လှိုင်းလုံးကြီးများ ၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများ စသည့် ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် လူသားမျိုးနွယ်စုတို့၏ ၈၀ % ခန့်အထိပင် သေကျေပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုးစွန်းများလည်း တိမ်းစောင်းပြီး ကမ္ဘာကြီးလည်ပတ်မှုမှာလည်း ၃ ရက်ခန့်ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ နီဘီးရု ကမ္ဘာမှဝေးရာသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည့်အချိန်၌ ဤကမ္ဘာကြီးတွင် မည်သည့်အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ကျန်ခဲ့မည်နည်း။ မှန်းဆလို့ပင်မရနိုင် . . .။မျက်မှောက်ခေတ် Planet X ခေါ် 2003 UB 313 မှာလည်း ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ လက်ရှိနက္ခတ်တာရာကြည့်စခန်းများမှ မြင်နိုင်စွမ်းမရှိသောလမ်းကြောင်း ( Blind Spot ) မှ ၀င်ရောက်လာမည်ဟူသော ဖော်ပြချက်ကလည်း ရှိနေပြန်သည်။
ထို့အပြင် အမေရိကန် နှင့် ရုရှ တို့ မြေအောက်၌ မြို့တော်များ တည်ဆောက်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် လက်ရှိ အမှန်တယ်တည်ဆောက်နေသော အာတိတ်ဒေသရှိ မျိုးစေ့နမူနာ စတိုခန်းကြီးနှင့် တောင်ဝင်ရိုးစွန်းရှိ အမေရိကန် နက္ခတ်တာရာကြည့်စခန်းတို့မှာလည်း နီဘီးရု နှင့် ပတ်သက်နေသည် ဟူသော ကောလဟာလ များလည်း ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
လေ့လာသူများ၏ အဆိုအရ ၂၀၃၈ ခုနှစ်သည် နီဘီးရု တစ်ကျော့ပြန်လာရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ ကွဲလွဲမှုတစ်ခုမှာ Planet X ရောက်ရှိမည့်အချိန်က အနည်းငယ်စောလျက်ရှိသည်။ သို့သော် စကြ၀ဠာကြီးနှင့်နိုင်းယှဉ်လျှင်မူ ပြောပလောက်သည့် ကွာခြားမှုတော့မဟုတ်ပေ။ မည်သို့ဆိုစေ . . . အထက်ပါ ဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်နိုင်သည် ၊ မဖြစ်နိုင်သည် အတတ်မပြောနိုင်သော်လည်း ဆိုမားရီးယန်းတို့၏ နီဘီးရု ( သို့မဟုတ် ) မျက်မှောက်ခေတ်၏ ဒဿမမြောက်ဂြိုလ်ကြီး Planet X ၏ အန္တရာယ် ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ကျရောက်လာနိုင်ဖွယ် အကြောင်းကတော့ဖြင့် ရှိနေပေသေးသည်။ ကဲ . . . မိတ်ဆွေ သင်ရောဘယ်လိုလဲ ၊ ဒဿမမြောက်နတ်ဆိုး အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲ?
စာကြွင်း။ ။ ဆူမားရီးယန်း = ( BC 5200 – BC 4500 ) အတွင်း
(Sumerian) ယူဖရေးတီးနှင့် တိုက်ဂရစ်မြစ်ဆုံရာ မြစ်ဝှမ်းဒေသ ၊
ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့၌ ထွန်းကားခဲ့သော လူမျိုးစုအမည်။
သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်း 2008 April
အီးလမ်း တမီးလ်ကျား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့LTTE အမျိုးသမီးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဟာ စွမ်းဆောင်ရည်
ကြောင့်ရော စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာ ပြတ်သား မှု့ ကြောင့်ပါ နာမည်ကြီးလှပါတယ်။ အမျိုးသမီး တွေချည်းဘဲ ပါဝင်
တဲ့တပ်ဖွဲ့ တွေဟာ ရှေ့ တန်းစစ်မြေပြင်မှာ တောက်လျှောက်တိုက်နေကြတယ်။ ဒီမိန်းကလေး တွေဟာသီရိ
လင်္ကာမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ ပိုင်းမှာရှိတဲ့ တမီးလ်ဇာတိမြေကိုကာကွယ်ဖို့ အတွက် အသက်စွန့်လှူဖို့ ပိုင်းဖြတ်
ထားကြတယ်။ခေတ်မှီုပြီး ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိတဲ့ တမီလ်း ကျားသူပုန်တွေရဲ့"ငြိမ်းချမ်းရေးအတွင်းဝန်ရုံး"
အဆောက်အဦးထဲမှာတော့ တမီလ်းကျားမတွေဟာ နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီ အက်ပဲလ် ကွန်ပျူတာတွေသုံး
ပြီ သက်ဘ်ဆိုက်တွေကို နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက် တွေဖြည့်သွင်း အပ်ဒိတ်လုပ်နေကြတယ်။ ဒီ
မိန်းခလေးတွေဟာ ဆံပင်တိုတို သို့ မဟုတ် ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ထားကြတယ်။ ရှေ့ တန်းစ်မြေပြင်မှာတော့အစိမ်း
ရောင် ပြောက်ကျားဝတ်စုံတွေ ၀တ်ကြပြီး နောက်တန်း မှာတော့ ဘောင်းဘီအနက်နဲ့ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူတွေ
၀တ်ကြတယ်။ကျားမတွေဟာ အနေအထိုင်အပြောအဆို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်ရှိကြပြီးသီရ
ိလင်္ကာအစိုးရ စစ်တပ်ကိုရည် ညွှန်းတဲ့ အခါမှာ "ရန်သူ" လို့ သုံနှုန်းကြတယ်။ မိန်းခလေး အများစုဟာ အင်္ဂလိပ်
စကား ပြောတတ်တယ်။ကျားမတွေအတွက် သင်တန်းကပြင်းထန်လှပါတယ်။ စစ်သင်တန်း အပြင် တမီလ်း
လူမျိုးရဲ့ သမိုင်း ၊ တမီးကျား အဖွဲ့ ရဲ့ တိုက်ပွဲ တွေ အကြောင်း ၊ "အာဇာနည်တွေ" အကြောင်းသင်ရတယ်။
စစ်ပွဲ ပြင်းထန်နေချိန်မှာတော့ သင်တန်းကျောင်းပိတ်ထားပြီး ရှေ့ တန်းထွက်နိုင်
တဲ့ ရဲမေအားလုံး ရှေ့ တန်းသွားတိုက်ရပါတယ်။ အထူးလက်ရွေးစင် ရွေးချယ်ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့
"ကျားနက်" အသေခံဗုံးခွဲရေး တပ်ဖွဲ့ ထဲမှာလည်း နည်းလှတဲ့ အမျိုးသမီး တွေ ပါဝင်နေပြီး ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့
စစ်သင်တန်း ။ နိုင်ငံရေးသင်တန်းတွေ တက်ရပါတယ်။
တာမီးလ်ကျားသူပုန်တွေရဲ့ရေတပ်နဲ့ လေတပ်ဖြစ်တဲ့ "မင်လယ်ကျား" တပ်ဖွဲ့ နဲ '' လေကျား"တပ်ဖွဲ့ တွေထဲမှာလဲ ကျားမတွေ အရေးပါတဲ့ နေရာတွေက ပါဝင်နေကြပါတယ်။
တမီးလ်ကျားသူပုန်ဗဟိုဌာနချုပ်က ကျောင်းဆောင်တွေနဲ့ တခြားအဆောက်အဦး
တွေမှာ သီရီလင်္ကာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မူ့ ဒါဏ် ချက်တွေ တွေ့ နေရတယ်။
အစိုးရစစ်တပ်က တမီးလ်ကျားတပ်စခန်း တွေကို အမြောက်နဲ့ ပစ်နေတဲ့ အသံတွေကို နေရော ညပါကြားနေရတယ်။တမီးကျား လွတ်မြောက်ဒေသတွေကို အစိုးရက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ထားတဲ့ အတွက် လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေ ၊တခြားအခြေခံကုန်ဈေးနှုန်းတွေဟာ
အရင်နှစ် သြဂုတ်လတုံးက အေ၉ အေ၉းပြေးလမ်းမကြိးကို အစိုးရကပိတ် ဆို့ 
လိုက်တဲ့ အတွက် တမီးလ်ကျား ဌာနချုပ် ကီလင်နော့ချီနဲ့နိုင်ငံ့မြောက်ပိုင်းနယ်မြေ
အများစုကြား အဆက် အသွယ် ပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်။ မိသားစုတွေလဲ တကွဲတပြား ဖြစ်ကုန်တယ်။
ဒါပေမယ် တမီးကျားတွေဟာ သူတို့ လွတ်မြောက်ဒေသထဲမှာတော့ အာဏာအ
ပြည့်အ၀ရှိတယ်။ တရားရုံးတွေ ၊ ရဲဌာနတွေ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးတွေချထားတယ်။ တမီးလ်
ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မိမိတို့ အထဲက အတိုက်အခံပေါ်လာရင် အင်မတန် လက်သွက်
တကယ့် သဘောထား အစစ်အမှန်ကို သိနိုင်ဖို့ လက်လှပါတယ်။
သီရိလင်္ကာမြောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့  ပိုင်က တမီးလ်မိသားစု အများအပြားဟာ စေ
တနာဆန္ဒအလျှောက်သော်လည်ကောင်း ၊ ဇွတ်အတင်းကောက်ခံမှု့ ကြောင့်သော်လည် ကောင်း သားသမီးတယောက်ကို "တော်လှန်ရေး'' ထဲ ထည့်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့တမီးလ် ကျား အဖွဲ့ နာမည်ကျော်နေတာကတော့ အသေခံ ဗုံးခွဲ မူ့ နည်းဗျူဟာ ကျင့်သုံးပြုမူ ဖြစ်သလို ခလေး စစ်သား အသုံးပြုမူ့ ကြောင့်လည်းနားမည်ပျက်နေပါတယ်။ ဒီနှစ်
ချက်ကြောင့် အမေရိကန် ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ ၊ ဗြိတိန် ၊ ကနေဒါ ၊ သြစတြေး လျ စတဲ့ နိုင်ငံက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့တမီလ်းကျားတွေရဲ့လျှို့ လျှို့ ဝှက်ဝှက်နိုင်လှတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗဲလူပီလေး ပရားဘာကာရန်ကတော့ အမျိုးသမီး တပ်မှူးတွေအပါအ၀င် တမီးလ်ကျား
တွေရဲ့ ရာနှုန်းပြည်ထောက်ခံမှူ့ ကိုဆက်လက်ရနေပုံပေါ်ပါတယ်။ တမီးလ်ကျား အမျိုးသ မီး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အက်စ်သာမီလီနီကတော့ နိုင်တကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ အမြင်
သွေလွဲ နေတယ်လို့ ပြေပါတယ်။ ကျားမတို့ က သီရိလင်္ကာ စစ်တပ်ကို တိုက်တာဟာ နိုင်ငံတော့်အကြမ်းဖက်ဝါဒကွဲပြားချက်ကို သဘောပေါက်သင့်တယ်။ ကျမတို့ ဟာ
အကြမ်းဖက်သတွေမဟုတ်ဘူး။ ကျမတို့ က အရပ်သားပစ်မှတ်တွေကို မတိုက်ဘူး လို့ သူမကပြောပါတယ်။
"ကျမတို့ တမီးလ်လူမျိုးက တကမ္ဘာလုံးပြန့် နေတယ်။ တမီးလ်လူမျိုးတွေဟာ အင်မတန်လဲ ဦးနှောက်ကောင်းကြတယ်။ နိုင်ငံတကာရောက်တမီးလ်တွေက ကျမတို့ 
ကိုအကူ အညီအထောက်အပံ့တွေတောက်လျှောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ ငွေရေးကြေး ရေးတင်မဟုတ်ဘူးရှင့်။ စိတ်ဓါတ်ရေးရာပဲ"။
ဒီလိုနိုင်ငံတကာရောက် တမီးလ်လူမျိုးတွေ အကူ အညီနဲ့ တမီးလ်ကျားတွေဟာနိုင်ငံခြားမှာ
လေယာဉ်မောင်းပညာ လေယာဉ်အင်ဂျင်နီယာပညာတွေသင် ၊ နိုင်ငဲခြားက လေယာဉ်ဝယ် ၊ တစစီဖြုတ် သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံထဲခိုးသွင်း ၊ ပြန်တပ်ဆင်ပြီး ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံး သူပုန်လေတပ် ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
အသက် (၂၁)နှစ်ရှိတဲ့ မလာသီဟာ (၁၉) နှစ်အရွယ်မှာ တမီးလ်ကျားအဖွဲ့ ထဲဝင်ခဲ့ တယ်။ သူမကလဲ အခုလိုအတွေ့ အကြုံ ပြေပြတယ်။
"ရှေ့ တန်မှာ အခက်ဆုံးအခုပ်က တော့ ရန်သူက အမြောက်နဲ့ ပစ်တာကိုရင်ဆိုင်
ရတဲ့အလုပ်ပါ။ ကျမ သူသတ်ခဲ့ဖူးပါပြီ။ ရန်သူကိုသတ်လိုက်ရရင် စိတ်ထဲမှာကျေနပ်သွား
တယ်။ ကျမတို့ က အမိမြေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သမားတွေ ဖြစ်တယ်။ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ၀င်သမားနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားကွဲပြားချက် ကို နိင်ငံတက
နောက်တန်းမှာတော့ မလာသီရဲ့အမျိုးသမီးနှလုံးသား ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ "စစ်ဖြစ်ရင် ဒုက်ခအရောက်ဆုံးက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေဘဲရှင့်။ အဲ့ဒါကြောင့်
အမျိုးသမီးတွေ စစ်သားလုပ်ရင် ပိုထူးချွန်တတ်တယ်။ကျမကတော့ တော်လှန်ရေးပြီး သွားတဲ့ အခါ ၊ တိုင်းပြည်ရတဲ့အခါကျရင် မိခင်ဘ၀ခံယူဖို့ စဉ်းစားမယ်" ။
မလာသီဟာ မိဘတွေနဲ့ မတွေ့ ရတာ အတော်ကြာသွားပြီဖြစ်တယ်။ သူမမိဘ တွေက မြောက်ပိုင်းက ဂျက်ဖနာမှာ ပြည်တွင်းရွှေပြောင်းဒုက်ခသည် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒိ ဒေသကို အခုသီရိလင်္ကာစစ်တပ်က ထိန်းချုပ်ထားပြီး တမီးလ်ကျားဗဟို ဌာနချုပ်ကီလင်
နော့ချီနဲ့အဆက်ဖြတ်ခံနေရတယ်။ အခုတော့ တမီးလ်ကျားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗဲလူးပီ
လေ ပရာဘာကာရန်ဟာ မလာသီရဲ့ မိဘသစ် ၊ ဖြစ်နေပါပြီ ။ "သူဟာကျမအတွက် တပ်မူးလဲဖြစ်တယ် ၊ ခေါင်းဆောင်လဲဖြစ်တယ်။ ကျမအတွက်အရာရာ ဖြစ်တယ်" လို့မာလာသီကဆိုပါတယ်။ မလာသီရဲ့ ခံယူချက်ဘယ်လောက်ခိုင်မာသလဲ ၊ အသေခံ ဗုံးခွဲဖို့ အထိစွန့် လွှတ်ဖို့ စဉ်းစားသလားလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ "ခေါင်ဆောင်ကြီးကသာ
ခွင့်ပေးရင် ကျမ ကျားနက်လုပ်မယ်" တဲ့။ တမီးလ် ကျားအမျိုးသမီး အမျိုးသားအားလုံး အတွက် အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းကြတဲ့ ဆုလာဘ်ကတော့ အသခေံဗုံးခွဲ ခရီးမထွက်ခင်မှာ ခေါင်းဆောင်ကြီး ပရာဘာကာရန် နဲ့ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ခွင့်ရဖို့ ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ခွဲခြားဖိနိပ်မှု ကြီးလှတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပေမဲ့ တမီးလ်ကျားမတွေကတော့ အမျိုးသမီး လွတ်မြောက်ရေးကို သီးသန့် စဉ်းစားပြောဆိုး နေတာ မကြားရပါဘူး။ မိမိလူမျိုး မိမိ ဒေသလွတ်မြောက်ရေးကိုသာ ဦးထိပ်ထားပြီ ရန် သူကိုမီးကုန်ယမ်းကုန်တိုက်ဖို့ သာ ဦးတည်စဉ်းစားနောတတွေ့ ရပါတယ်။
တဖက်မှာတော့ (၂၄) နှစ်ကြာ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ ဒါဏ်ချက်တွေကိုလည်း တမီးလ်အရက်သားပြည်သူတွေခံနေရပါတယ်။ တမီးလ်ကျာိးဗဟိုဒါနချုပ် အောင်ဇေယျ ဗိမာန်မှာ စစ်ကြောင့် စိတ်ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး (၁၀၀) ကျော်ကိုနေရာ ချထားတယ်။ ဒီဌာနဟာ သန့် ရှင်းသပ်ရပ်ပေမဲ့ ခေတ်မှီအသုံးအဆောင်တွေ မရှိ်ပါ။ အမျိုးသမီးတွေကိုတော့ စိတ်ငြိမ်ဆေးပမာဏ များများပေးထားပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီး တွေပြောတာကသူတို့ မိသားစုကနေခွဲထုတ်ထားရတယ်ပြောပါတယ်။ တချို့ ကတော့ပြန် စရာအိမ် ၊ ပြန်စရာမိသားစု မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တချို့ ကလဲသီရိလင်္ကာစစ်တပ်ရဲ့
အမြောက်ဆံ ဗုံးံကလွတ်အောင် ပြေးလာခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်အတွင်း လူနာအရေအတွက် အကြီးအကျယ်တိုးလာခဲ့တယ်။
ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိလှတဲ့ အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ် ဂျက်ကာသာကတော့
သီရိလင်္ကာစစ်တပ်က မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ တမီးလ်ကျားမြို့ တော်ဟောင်းဂျက်ဖနာကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူမရဲ့ မိသားစုနဲ့ ကွဲသွားခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်။ "ကျမတို့ဘယ်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မလဲ" လို့ မေးပါတယ်။
တော်လှန်ရေးအတွက် အသေခံဖို့ အဆင်သင့်ရှိတဲ့ တမီးလ်ကျားမတွေမရှား ပါးမပြတ်လပ်သေးသလို သီရိလင်္ကာစစ်တပ်ကလည်း မြောက်ပိုင်းမှာ စစ်ဆင်ရေးကြီး လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ ကတော့ ဝေးနေဆဲပါဘဲ။
နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပသည့် ၆၃ ကြိမ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး၌ ပြည်သူ့ထံသို့ အာဏာအပ်နှင်းမည်ဟု မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။
တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွင် အလေးပြုခံယူနေသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ဓာတ်ပုံ - AP)
အသက် ၇၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် ၎င်းတပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွင် စစ်သား၊ ရဲ နှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၁၃၀၀၀ ကျော်ကို ပြောကြားသည့် ၁၅မိနစ်ကြာမိန့်ခွန်း၌ မေလတွင် ပြည်လုံး ကျွတ်ဆန္ဒ ခံယူပွဲကျင်းပမည်ဆိုခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ပြီးစီးပါက အရပ်သားအစိုးရထံ အာဏာ အပ်နှင်း မည် ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောဆို ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းအခမ်းအနားသို့ ပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်များနှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများကို ဖိတ်ကြားသော်လည်း နှစ်စဉ်ဖိတ်ကြားလေ့ရှိသော နိုင်ငံခြားသားသတင်းထောက်များကိုမူ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းကိုအကြောင်းပြု၍ လုံခြုံရေးအရ ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာနက ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာအီဗရာဟင်ဂမ်ဘာရီက မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနှင့် အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရကို စံနမူနာပြု၍ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုမှ အရပ်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်သည့် ပုံစံပြောင်းလဲ၍ အုပ်ချုပ် သွားရန် ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု စင်ကာပူ စထရိတ်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို ၁၉၆၆ခုနှစ်ကတည်းက စစ်အာဏာရှင် ဆူဟာတိုက ချုပ်ကိုင်ထားခဲ့ကာ ၎င်းစစ်တပ်မှ အနားယူ၍ အရပ်သားအစိုးရပုံစံပြောင်းလဲ လိုက်သည့် နောက်တွင်လည်း တိုင်းပြည်၏ အဓိကကျသည့် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကို ဆူဟာတိုကသာ အရပ်သားတဦးအဖြစ် ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတဦးဖြစ်သည့် ဦးဌေးအောင်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ မိန့်ခွန်းသည် စစ်အစိုးရ ဖေဖော်ဝါရီလက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ကြေညာချက်အတိုင်း ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့် ရွေးကောက် ပွဲကို အမှန်တကယ်ကျင်းပမည်ဟု သက်သေထူလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဝေဖန်သူများကမူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေနှင့် ၎င်းဆုပ်ကိုင်ထားသော အာဏာကို အရပ်သားဦးသန်းရွှေထံသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းသာဖြစ်မည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
စစ်အစိုးရအနေနှင့် တရားမျှတ၍ လွတ်လပ်သော ဆန္ဒခံယူပွဲကိုကျင်းပမည်ဟု ပြည်ထဲရေးနှင့် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဆန်းက နေပြည်တော်၌ကျင်းပသည့် တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွင် ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာများကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အေပီသတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိတွင်မူ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ထောက်ခံမဲသာထည့်ရန်နှင့် မိမိ၏မိသားစုများကိုထောက်ခံမဲထည့်ရေး အတွက် စည်းရုံးရန် ဝန်ထမ်းများကို ဖိအားပေးခိုင်းစေလျှက်ရှိကြောင်း ဝန်ထမ်း အသိုင်းအဝန်းမှ ကြားသိရသည်။
ထိုကဲ့သို့စည်းရုံးရာတွင် အခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံခြင်းမပြုပါက ရာထူးချသည်အထိအရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထောက်ခံမည်ဆိုပါက သင်္ကြန်တွင်းကာလအတွက် ချေးငွေများထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အရာရှိများက လက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို ပြောဆိုသည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးကပြောသည်။
စစ်အစိုးရက တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား ကျင်းပနေသည့် တချိန်တည်းတွင် အဓိကအ တိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော NLD ပါတီက ၆၃ကြိမ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန် ရှိပါတီ ဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပလျှက်ရှိသည်။ ယခင်က မတ်လ ၂၇ရက်နေ့ကို တော်လှန်ရေးနေ့ ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ သော်လည်း စစ်အစိုးရက တပ်မတော်နေ့ဟူ၍ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာ၌ ပါဝင်ခဲ့သော သခင်သိန်းဖေ၏ အိမ်တွင်လည်း ဝါရင့်နိုင်ငံရေး သမားဟောင်းကြီးများစု၍ တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားတရပ် ကျင်းပသည်ဟုသိရသည်။
ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတဦးလည်းဖြစ်၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်သူ သခင်ချန်ထွန်းက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားများအနေနှင့် စစ်အစိုးရ၏ အဖမ်းအဆီးမှ လွတ်မြောက် ရန် ပုန်းခိုနေရသဖြင့် ၎င်းတို့ကျင်းပသော တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားတွင် မပါဝင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားခလေးတယောက်ရဲ့  ဘ၀ဟာဘယ်လောက်များ မျော်လင့်ချက်တွေ မျော်လင့်ချင်း တွေနဲ့ရှင်သန်နိုင်မှာလဲ သူတို့မှာအနာဂတ် ဆိုတာကောရှိသေးရဲ့ လား မျော်လင့်ချက်တွေ အနာဂတ် တွေမရှိတော့မယ်အတူတူဆိုပြီး မိဘတွေက ကျောင်းတွေကို တ၀က်တပျက်နဲ့ထွက်ခိုင်း တပိုင်းတဆနဲ့ ကျောင်းနုတ်နဲ့ပေါ့
ငါကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတာပဲ ငါတို့မိဘတွေ တွေးတာလဲမမှားပါဘူး ကျောင်းထားလို့ကျောင်းတတ်တော့ကောဘာထူးမှာလဲ ကျောင်းစရိတ်ကုန်မယ် အချိန်ကုန်မယ် ဒါတွေပဲ အဖတ်တင်မှာပဲ တော်တော်ကြာလာပြန်ပြီ ကျူရှင်ခ တော်တော်ကြာလာပြန်ပြီ ဆရာမ ကိုဘာဝယ်ပေးရမှာတို့ ဒါတွေဟာ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့ မြန်မာပြည်ကအကျင့်စရိုက်လေးတွေပါ ကျောင်းတတ်ပါတယ်ဆိုကာမှ တနှစ်စာ ကျောင်းဝင်ကြေးပေးပြီး တော်ရောပေါ့ မပြီးနိုင်မဆီး နိုင် တော်ကြာပိုက်ဆံ ဘာဖိုးညာဖိုးနဲ့ အမေ့ ထမိန်ပေါင်းပြီးပေးခဲ့ရတဲ့ပိုက်ဆံကလည်းမနည်းတော့ဘူး အခုဟာက ပညာကိုပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်နေရသလိုဖြစ်နေပြီ အစိုးရကကောလစာတွေ ပေးမထားဘူးလား ငါတို့ကကော ကျောင်းဝင်ကြေးတွေမပေးထားလို့လား ဘယ်လောက်ပေးပေး ရလေ လိုလေ အိုတ စေ တွေပါပဲ ပိုက်ဆံတွေပေးရ လက်ဆောင်တွေဝယ်ပေးရနဲ့ ပြီးတော့ပညာကိုကောင်းကောင်းသင် ပေးသလားဆိုတော့ မဟုတ် ဆရာမတွေက ကျောင်းသားတွေကို အမြဲတမ်းပြောနေကြစကားမနက် ဖန် လက်ဖက်သုတ်ယူခဲ့နော် ငါအမြဲတမ်းထိထိနေတဲ့စကား နင့်အိမ်က ပြေလည်တယ် နင်ပဲယူခဲ့ဆို တဲ့စကားငါ့နားထဲကထွက်ကိုမထွက်သေးဘူးငါ့အိမ်မှာဘယ်လိုရှာကြံပြီးဝယ်ခဲ့ရ သုတ်ခဲ့ရတယ်ဆို
တာသူတို့မှမသိပဲငါကျွေးတဲ့လက်ဖက်သုတ်ကိုစား ဆရာ/မ တွေဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစားလိုက်သောက်လိုက် ရယ်မောလိုက်ကြပေါ့ ငါ့မှာတော့စာသင်ခန်းထောင့်လေးမှာထိုင်ပြီးကျောင်းစာတွေကိုသင်ပြသူမဲ့ တဲ့ဘ၀နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးအဖြေညိခဲ့ကြိမ်ပေါင်းလဲမနည်းပါဘူး ငါ့ထက်ဆိုတာက ငါ့သူ ငယ်ချင်းတွေပဲသူတို့ကဘာမှမပေးနိုင်တော့ အမြဲတမ်းဆူပူကြိမ်းမောင်းခံခဲ့ရပေါ့ ဆရာတွေ ဆရာမ တွေဘယ်လောက်ပဲ အသုံးမကြ ကြပါစေ ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ တယောက်တည်းမရတဲ့ပုဒ် စာတွေကို တအုပ်ကြီးဝိုင်းစဉ်းစား ကြတာပေါ့ ဒီလိုနဲ့ပညာကိုမပြည့်တပြည့်သင်ကြားမူ့ဘ၀ကနေ ပြီး (၁၀)တန်းဆိုတဲ့ ပထမ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းရတော့တယ် ငါတို့တွေ အသည်းအသန်ဖြေလိုက်ကြ တာပေါ့ ဒါပေမဲ့အောင်လားဆိုတော့ အောင်ဘူး စိတ်မလျော့ကြပါဘူး နောက်တနှစ်အဲ့မှာစတော့ တာပဲ ငါဟာလူပျိုပေါက်စ ပြီးတော့အပြင်ပအသိပညာလေးတွေကလည်း တိုးလာဆိုတော့ဘယ်ခံ တော့မလဲငါဘ၀ရဲ့ နာကြီးချက်တွေကို စပြီးဖေါ်ထုတ်တော့တာပဲ စာမေးပွဲဖြေတဲ့ တနေ့ပေါ့ ငါကို ဆရာမက အနား နားလာပြီးကပ်ပြောတယ် ဟေ့ကျော်လင်းထွန်း နင်စာမေးပွဲအောင်ချင် လားတဲ့ ငါလဲအောင်ချင်တာပေါ့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲတခါတည်းကိုအောင်ချင်တာပေါ့လို့ပြောလိုက်တာ
ဆရာမကဘာပြောတယ်အောင်းမေ့လဲ ပိုက်ဆံနှစ်သောင်းပေးရင် အဖြေစာအုပ်ပေးပြီးကူးချမယ်တဲ့ ဟာပြောရက်လိုက်တာဆရာမရယ် ငါ့မှာဘယ်ကပိုက်ဆံနှစ်သောင်းရှိမှာလဲရှိတော့ကောပေးစရာ လား လက်ဖက်သုတ်တောင်မှ ငါ့အမေ ထမိန်ပေါင်ပြီး ကျွေးလာရတာကို ဒီပိုက်ဆံနှစ်သောင်းတာ ဆိုရင် ငါ့အမေပိုင်တဲ့ ၀ိုင်းလေးနဲ့အိမ်စုတ်လေးကိုရောင်းရင်တောင်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး ငါထင်နေ တာက ဆရာမပြောမယ်စကားက နင်ကိုကျူရှင်အလကားသင်ပေးမယ် စာမေးပွဲမဖြေခင်လာခဲ့လို့ အောင့်မေ့နေတာ တကယ်တန်းကြားလိုက်ရတဲ့စကားက ပိုက်ဆံနှစ်သောင်းတဲ့ ပေါက်ကွဲပြီပေါ့ မပေးနိုင်ဘူးပေးစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့ ထအော်လိုက်တယ် အဲ့ဒိမှဆရာမလည်းရှက်ရှက်နဲ့ငါ့ခေါင်း ကိုလာခေါက်လေရော ဒေါသကထွက်နေပါတယ်ဆိုမှ ခေါင်းကိုလာခေါက်သေးတယ်ဆိုတော့ လူသတ်ချင်စိတ်ပါပေါက်သွားတယ် ဆရာမရဲ့ ပုခုန်း နှစ်ဖက်ကိုကိုင်ကိုင်ပြီး ဆွဲလုပ်စကားပြောလိုက် တယ်နင်တို့လို ပိုက်ဆံပဲမက် ပညာကိုမသင်ပေးချင်တဲ့ဆရာမတွေဘယ်တော့မှငါပိုက်ဆံမပေးဘူး လို့ ဒေါသထွက်ထွက်ပြန်ပြီးဆောင့်တွန်းလိုက်မိတယ် ဆရာမလည်းခွေခွေလေးလဲနေရာကနေထ ပြေးပြီးကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့တိုင်လေတော့တယ် ကျော်လင်းထွန်း ကျမကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော် ကားပါတယ်ပေါ့ ပြောသွားတာတွေကိုတခုမှမပါသွားဘူး အဲ့ဒိမှာငါ့ကိုကျောင်းအုပ်ကြီးခေါ်ပြီးတွေ့ ပါ တော့တယ် နင်ဆရာမကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားတယ်ဆိုဟုတ်သလားတဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ ငါလဲမငြင်းဘူး အဲ့ဒိနောက် ငါလဲဆရာမပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြအုံးမလို့ ပါးစပ်ပြင်ရုံပဲရှိ သေးတယ်နင်းကျောင်းတတ်စရာမလိုတော့ဘူး စာမေးပွဲလဲဖြေစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့နင့်လွယ်အိတ်
နင်ယူပြီးအိမ်ပြန်တော့တဲ့ ဟာ ငါ့မှာသေချင်စော်ပါနံသွားတယ် ပြန်ပြီးပြောပြခွင့်လဲမရှိ အယူခံဝင် ခွင့်တောင်မရတော့ပါလား ဆရာမပြောသွားတဲ့စကားတခွန်းသာအတည်ယူလိုက်တဲ့ကျောင်းအုပ် ကြီး နောင်တချိန်အခွင့်ရေးရင်သတ်ပြစ်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာကြိမ်းထားလိုက်တယ် အဲ့ဒိနောက်တော့ ကျောင်းနားက ရဲစခန်းကိုအယူခံမရှိရောက်ရှိသွားလေတော့တယ် ငါအမေလဲစိတ်ပူတာပေါ့ဘာ ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးရဲစခန်းကိုလိုက်လာတယ် ငါ့အမေကိုငါအကြိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်တော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲငါ့သားရယ်တဲ့ အခုအချုပ်ခန်းထဲကနေပြီးထွက်ရဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ ငါ့အမေ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီးသနားလိုက်တာ ငါဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲ အဲ့ဒိချိန်မှာ ဒုရဲအုပ်က တရာခံ ကျော်လင်းထွန်းမိဘနဲ့ တွေ့ ချင်တယ်ဆိုလို့ ငါအမေသွားတွေ့လိုက်တယ် သူတို့ တွေဘာ ပြောကြလဲငါမသိဘူး နောက်နေ့တော့ငါပြန်လွတ်လာခဲ့ရတယ် ငါ့အမေငါ့ကိုလာကြိုတယ် ဆရာမ ကိုပြသနာပြန်ရှာမှာကြောက်လို့ တဲ့ ငါလဲငါ့အမေနဲ့အတူရွာကိုပြန်ခဲ့တာပေါ့ အိမ်ကိုပြန်မယ့်လမ်းကို အမေကမပြန်ပဲ ငါ့လက်ကိုဆွဲပြီး ဘကြီးရှိတဲ့ ၀ိုင်းဘက်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ် ငါလည်း စဉ်းစားတာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့ထူးထူးဆန်းဆန်း ဒီဘက်ကိုခေါ်လာရသလဲ ငါတို့ အိမ်ကိုဘာလိုမပြန်လဲ တောင်စဉ် ရေ မရလျှောက်စဉ်းစားပြီးလိုက်လာတာ ဘကြီးအိမ်ကိုရောက်ပါလေရော အလားလား ဘကြီးအိမ် ရောက်မှနည်းနည်း ရိပ်မိတော့တယ် အမေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာလဲအမေဘာမှပြန်မပြောဘူးငြိမ် နေတယ် အဲ့မှာ ဘကြီးက၀င်ပြောတော့တယ် အကုသိုလ်ကောင် မင်းကြောင့် ၀ိုင်းနဲ့အိမ်လေးကို ရောင်းလိုက်ရတယ် ပိုက်ဆံမလောက်လို ငါ့တောင်ငါစိုက်ပေးလိုက်ရသေးတယ် မင်းဂျိုမွှေလို့ကွမင်း သိလား ငါ့မှာဘာပြန်ပြောရမှန်မသိလောက်အောင်
လိုက်ရတာလဲ ငါ့မှာအရမ်းသိချင်နေတယ် မနေနိုင်တော့ဘူးမေးလိုက်တယ် အမေဘာဖြစ်လို့ရောင်း လိုက်တာလဲဟင်လို့ ငါ့အမေပြောပြတယ် နင်အချုပ်ကလွတ်အောင် ပိုက်ဆံပေးပြီးအာမခံလုပ်ရ တယ်ငါ့သားတဲ့ သြော်ငါသိပြီ ဒုရဲအုပ် ခေါ်ပြီးငါအမေကိုတွေ့တာ ပိုက်ဆံခေါ်တောင်းတာပဲ အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လောက်လဲအမေ ဘယ်လောက်တောင်မို့ လို့ ဝိုင်းနဲ့အိမ်ကိုရောင်းလိုက်ရတာလဲလို့မေးမိလိုက် တယ် နှစ်သောင်းခွဲတဲ့ ဟာ!!!!!!!!!!!!!!!! ပိုက်ဆံနှစ်သောင်း မပေးနိုင်လို့ ဆရာမနဲ့စကားများဖြစ်တယ် အခုဟာကပိုက်ဆံ နှစ်သောင်းခွဲတောင်ပေးလိုက်ရပါလား ငါ့မှာအံသြလို့ကိုမဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဒိထက်
အံသြရာကောင်းတာက ပြသနာဖြစ်ပြီး(၂)နှစ်လောက်အကြာမှာ ငါ့သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ ရှတ်ရှား မှာကျောင်းသွားတတ်ခွင့်ရတယ်တဲ့ ဟာဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်တာလဲသူတို့တွေဆီကိုငါသွား
တဲ့ အဲ့ဒါကြောင့်စာမေးပွဲအောင်ပြီး ရှတ်ရှားသွားခွင့်ရတာတဲ့သြော်လောကကြီးရယ်ငါကိုတော်တော်
လဲငါ့ကိုမတားနိုင်တော့ဘူး ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်ကဘကြီးအိမ်မှာကပ်ပြီးနေ နေရလို့ ပဲ အဲ့နောက်တော့ ငါတချိန်ချိန်ကြရင် အခွင့်ရေးများရှိရင်သတ်မယ်လို့ တေးထားခဲ့တဲ့ကျောင်အုပ် ကြီးကိုလည်းမသတ်ဖြစ်ဘူး သင်ပြသူမဲ့ပြီး ပုဒ်စာကိုအဖြေအတူညှိခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီကိုလည်း မရောက်တော့ဘူး ငါ့အမေကိုလည်းငါ ပြန်မလှည့်ကြည့်တော့ဘူး ငါ့ဘ၀ဟာဦးတည်ချက်မဲ့သွားပြီ အဲ့ဒိနောက်တော့ခြေဦးတဲ့ရာလျှောက်လို့နေတော့တယ်
CA Yahoo Antispy.exe
ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ (ဓမ္မစေတီ) ၏ ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဘုရားရှိခိုး
တနေ့သောအခါ ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး သန်းရွေသည် နိုင်ငံရေး အခြေနေမကောင်းတော့မှန်းသိလေသောအခါ
ဘာလုပ်မှန်းမသိဖြစ်နေလေတော့သည် အဲ့ဒိနောက်သူ၏ တိုင်ပင်ဖေါ်တိုင်ပင်ဘက် ချီးလေးချီးအားတိုင်
ပင်လေတော၏ ထိုအခါချီင်္းလေးချီးတို့ မှအကြံပေးလိုက်သည်မှာ စင်္ကြာမင်းထံသို့ လျှောက်ထားမေးမြန်းစေ
လိုတော့သည်...ဗိုလ်သန်းရွေလည်း ဆီမီး၊ ပန်း ၊ သောက်တော်ရေချမ်းတို့ နဲ့ အတူ
စကြာင်္မင်းထံသို့ မေးမြန်းရန်ရောက်ရှိလာလေတော့သတည် ...................................................
သန်းရွှေ။ ။ စင်္ကြာမင်းကြီးခင်ဗျ နိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းတော့ပါသဖြင့်ဘာဆက်လုပ်
စင်္ကြာမင်း။ ။ လဲသာသေလိုက်တဲ့ .....................................................................
န.အ.ဖ................ဆိုတာအရှည်ဖတ်လိုက်ရင်(နွားအဖွဲ့ )လို့ အဖြေရတယ်......
ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကတောအခုဒင်းတို့ ပြောနေတဲ့ နေပြည်တော်(ကြက်ပြေး)ဆိုတာကြီးကတချိန်တုံးကဆိုနွားတွေအမြောက်အများမွေးတဲ့နေရာလို့ သိရတယ်...
ဒါဆိုရင်ဒင်းတို့ ကနေရာအ မှန်ကိုရောက်သွားကြတာပေါ့နော်......လိုက်လဲလိုက်ပါပေ့
န.အ.ဖ(နွားအဖွဲ့ )တို့ ရယ်..နေရာရယ်နာမည်ရယ်ကအခုမှအမှန်ဖြစ်သွားတယ်
လူတွေကိုဒင်းတို့ ကခြံခတ်တယ်အခုတော့ဒင်းတို့ ကိုတိုင်ဒင်းတို့ ခြံပြန်ခတ်နေကြပြီပေါ့
ဗိုလ်သန်းရွှေ ကြီးသေရင် ကျင်းတူးပြီးမြုပ်စရာမလိုဘူး မြေကြီးပေါ်မှောက်ခုံတာချထားပေးလိုက် သူဟာသူ
ဂုတ်သွေး စုပ်သူယုတ်မာတို့သွားရာလမ်း ငရဲပြည်သို့
အိမ်မက်ထဲမှာ အိမ်ပြန်လာတဲ့
အမေ မကြားပါရစေနဲ့ကွယ်....။ ။
ငါရပ်တည်မနေတာလွဲလို့ ။ ။မှတ်ချက်...........မ်ိုးသောက်ကြယ်
သူတို့ တွေငါကိုနုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ် မင်းကတော့လွတ်မြောက်သွားလေပြီတဲ့
ငါတကယ်ပဲ စနစ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်ဘ၀နေပြီလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီလား..........
တကယ်တော့ငါမလွတ်မြောက်သေးပါဘူး ငါ့ရဲ့  စိတ်ကိုအကျဉ်းချခံထားရတုံးပါ
ပဲ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ မင်းတို့တွေ ငါ့ရဲ့ မိသားစုတွေ ငါတို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ
အားလုံးက စနစ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်ဘ၀ကမလွတ်မြောက်ကြသေးလို့ပဲ ငါတို့ တွေ
အတူလက်တွဲကာ အားမာန်တွေစုစည်းကာ စနစ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်ဘ၀ကရုန်း
ထွက်ကြရအောင် ငါရဲ့ ဘ၀ကမလွတ်လပ်သေးဘူးဆိုပေမဲ ငါကိုစနစ်ဆိုးကြီက
မချုပ်နှောင်ကြတော့ဘူး.....မင်းတို့ တွေရယ် ငါ့မိသားစုရယ် ငါတို့ ပြည်သူလူထု
ရယ်ကို ငါစိတ်ပူမိတယ် ငါ့မှာတနေ့တနေ့အဲ့ဒိစိတ်နဲ့ပဲလုံးပါးပါးရတော့မယ်......
မင်းတို့ တွေ စနစ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်ဘ၀ကမလွတ်မြောက်သရွေ့ ငါစိတ်ပူရအုံး
မယ်....မင်းတို့ အတွက် ငါ့မိသားစုအတွက် ငါ့တို့ ပြည်သူလူထုအတွက်ငါ့မှာလုပ်
စရာတခုပဲရှိတော့တယ် ငါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ စနစ်ဆိုးကြီးကိုတိုက်
ထုတ်တော့မယ် တကယ်တော့ငါတို့ တွေဟာ စနစ်ဆိုးရဲ့ လက်အောက်ကရုန်း
ထွက်စရာမလိုပါဘူး စနစ်ဆိုးကိုတာ တိုက်ထုတ်ရမှာ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့
ငါတို့ မြေ ငါတို့ရဲ့  ရေ ကိုစနစ်ဆိုးကြီးကလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတာပါ အဲ့တော့
အိမ်ရှင်လာရင် ဧည့်သယ်ဖယ်ရမှာပေါ ငါတို့ တွေဟာအိမ်ရှင်တွေပဲ ဖယ်ချင်းဖယ်
ဧည့်သယ်တွေပဲဖယ်ရမှာပေါ .......ကဲစနစ်ဆိုးကြီး ဆိုတဲ့ဧည့်သယ်ကိုဖယ်ခိုင်း
ကြဆို့ လွယ်လွယ်နဲ့မဖယ်ရင် ရတဲ့နည်းနဲ့တောင်းကြဆို့ငါတို့ တွေပေးဆပ်သင့်
တာပေးဆပ်ရတော့မယ် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာလုပ်ရတော့မယ် ငါတို့ တွေခံစား
နေရတာကို ငါတို့လက်ထပ်မှာတင်အပြီးသတ်ပါ ငါတို့ ရဲ့ သားတွေ မြေးအထိလက်
ငါတို့ရဲ့ တာဝန်တွေကို (8.8.08)မှာအဆုံးသတ်ကြပါဆို့ ...............................
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ခေါ်(ဗမာ)ပြည်မှာ ဒီလိုမျိုးလေးတွေကောရှိသေးရဲ့  လားဒီလိုဓလေ့စရိုက်လေးတွေဟာအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါ တယ် ယခုလက်ရှိခေတ်မတိုင်ခင်ကတော့ဒီဓလေ့စရိုက်လေးတွေရှိခဲ့မှာပါအဲ့ဒိဓလေ့စရိုက်ကိုချစ်တယ် အဲ့ဒိခေတ်ကိုပြန်မသွားခြင်တော့ ဘူး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကမိန်ခလေးတွေကို အဲ့ဒိလိုဓလေ့စရိုက်လေးရှိစေချင်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်ပြောသလိုပဲ ဘာပဲလုပ် လုပ်နိုင်ငံရေးပဲဆိုသလို နိုင်ငံတော်အစိုးရကမှမကောင်းတာ ဓလေ့စရိုက်တွေလည်းဘယ်ကောင်းနိုင်ပါတော့မလဲ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမိန် ခလေးတွေဓလေ့စရိုက်ပြန်ပြီးလှပလာဖို့အဓိကလိုအပ်တာ လက်ရှိစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ပါပဲ........................
လုပ်ကြရမယ်ပြီးခဲ့တာတွေကိုပြန်မစဉ်းစားနဲ့ မရသေးတာကိုလဲမမျှော်မှန်နဲ့ မရဘူးဆိုတာမ
ရှိဘူး မရသေးတာပဲရှိမယ် ထင်းစည်းတစည်းလိုတညီတညွတ်တည်းရှိကြမယ်ဆိုရင်....
(ဘယ်တော့မှ မပြိုကွဲ မပျက်စီး မကျရှုံးပါဘူးဆိုတဲ့ "ရောမမြို့ " ကြီးတောင် ကျရှုံး ပျက်စီးသွားသေးတာပဲ မြန်မာလိုနိုင်ငံလေးကဘာမို့လို့
လဲ တနေ့ခွပ်ဒေါင်းတွေလက်ထဲကို ပြန်ကိုရောက်ရှိစေရမယ်)
။ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၇:၀၀ - မြန်မာစံတော်ချိန်
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ဖဒိုမန်းရှာသည် အမည်မသိ
လက်နက်ကိုင် ၂ ဦးက သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ် လုပ်ကြံခံရသဖြင့် ယနေ့ မွန်းလွဲတွင် သေ
ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့ မဲဆောက်နေအိမ်တွင် ထိုင်နေစဉ် ကားဖြင့် ရောက်လာသော သေနတ်သမား နှစ်ယောက်က ပစ်သတ်ခဲ့ခြင်း
ဖြစ်သည်ဟု မဲဆောက်နေသူများ၏ အပြောအရ သိရသည်။
ထပ်မံလွှင့်တင်ချိန်။ ။ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၇:၁၅ - မြန်မာစံတော်ချိန်
"သေနတ်တချက် ပစ်တယ်။ နောက်နှစ်ချက် ဆက်တိုက် ပစ်တယ်။" ဟု ဖဒိုမန်းရှာ အိမ်နဘေးတွင် နေထိုင်သူ တဦးက ပြောသည်။
ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်သည် ထိုင်းစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၄ နာရီ ၃ဝ ခန့်တွင် နေအိမ် အပေါ်ထပ်တွင် စာဖတ်နေစဉ် ကားဖြင့်
ရောက်လာသော သေနတ်သမားများက အပေါ်ထပ် တက်လာပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
သေနတ် ၄ ချက် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ရင်ဘတ်ကို ထိမှန်ကာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အတိုင်း အစောင့်အကြပ် ထားရှိခြင်း မရှိသော နေအိမ်တွင် အောက်ထပ်တွင်သာ ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ယောက်သာရှိရာ အလွယ်တကူ
ထပ်မံလွှင့်တင်ချိန်။ ။ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၇:၃၀ - မြန်မာစံတော်ချိန်
ဖဒိုမန်းရှာ၏ ရုပ်ကလပ်ကို နေအ်ိမ်တွင်ပင် ထားရှိသည်။ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး ယူကြုံးမရ
ဖိုးဝှီးကား အမဲရောင် နံပါတ် ၄၂၅ ဖြင့် ရောက်လာသော သေနတ်သမား ၂ ယောက်အနက် တဦးက အိမ်ပေါ် အရင်တက်လာပြီး
ကရင်ဘာသာဖြင့် နေကောင်းလားဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသော နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောပြီးနောက် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု
သိရသည်။ နောက်ကျ တက်လိုက်လာသော သေနတ်သမားကလည်း ပစ်ခတ်သွားခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
၉ မမ ကျည်ဖူးတခုကို ယခုအချိန်တွင် တွေ့ရှိထားပြီး ထိုင်းရဲက စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု ဆက်လက် ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာ
နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သော မဇ္ဈိမ ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက်က ကိုအောင်တင်က ပြောသည်။
သေနတ်သမားများမှာ အရပ် ၅ ပေ ၅ လက္မခန့် ရှိသည်ဟု မျက်မြင်သက်သေ တဦးက ပြောသည်။
ထပ်မံလွှင့်တင်ချိန်။ ။ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၇:၄၅ - မြန်မာစံတော်ချိန်
သေနတ်သမားတယောက်၏ ယာဘက် လက်ဖျံတွင် နဂါးရုပ် ဆေးမှင်ကြောင် ထိုးထားသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်ဟု မျက်မြင်တဦးက
ပြောသည်။ သေနတ်သမားများမှာ အသက် ၃ဝ ကျော်အရွယ် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
တဦးနှင့်တဦး ၁ဝ ပေကျော် အကွာခန့် တတ်လာသော သေနတ်သမားများက ကရင် ဘာသာစကားဖြင့် နှုတ်ဆက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု
သေနတ်သံ ကြား၍ အပြေး ထွက်လာသော နေအိမ်အောက်ထပ် (မြေညီထပ်)မှ ကရင့်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ရုံးဝန်ထမ်း ၂
ယောက်အား ဖဒိုမန်းရှာကို ပစ်ခတ်မှု ပြုပြီးနောက် ပြန်ဆင်းလာသော သေနတ်သမား နှစ်ယောက်အနက် တဦးက သေနတ်တချက်
ပစ်ခတ်ခဲ့သေးသော်လည်း ထိမှန်ခြင်း မရှိပါ။
ဖဒိုမန်းရှာလဖန်း (၆၄) ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
- ၂ဝဝ၈ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄) ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံခံရ။
- ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ကေအန်ယူ (၁၃) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံတွင်လည်း အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အရွေးခံရ။
- ၂ဝဝဝ တွင် ကေအန်ယူ (၁၂) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံတွင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာ။
- ၁၉၉၅-၉၆ ကေအန်ယူ (၁၁) မြောက်ညီလာခံတွင် တွဲဘက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဖြစ်လာ။
- ၁၉၉ဝ တွင် ဗဟို ကော်မတီ ဖြစ်လာပြီး၊ မဟာမိတ်ရေးရာများကို တာဝန်ယူခဲ့။
- ၁၉၈၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ တောခိုလာသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်မြ၏ အနီးကပ် ကိုယ်ရံတော်ဖြစ်လာ။
- ၁၉၈၄ မှာ အရံ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဖြစ်လာ။
- ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ကေအန်ယူ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းသောအခါ ညောင်လေးပင် ခရိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းခဲ့။
- ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ပဲခူးရိုးမရှိ ကေအန်ယူ ဗဟိုသို့ ပြန်လာရောက်။
- ၁၉၆၈ တွင် ကရင်ပြည်နယ်ကို ဖြတ်ပြီး။ ရှမ်းပြည်နယ်စပ် ရလလဖ နယ်မြေတွင် နေထိုင်ခဲ့။ တရုတ်နယ်စပ်တွင် နိုင်ငံရေးသင်တန်း
တက်ခဲ့။ (ဗကပ) နှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးခဲ့မှုများ လုပ်ခဲ့။ သဘောတရားရေးရာ သဘောမတူမှုများ ရှိခဲ့သဖြင့် ကြာကြာမနေဘဲ
- ၁၉၆၆ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သမိုင်းဘာသာဖြင့် ဘွဲ့ရ။ ၎င်းနောက်တွင် ကရင့်တော်လှန်ရေးသို့ ရောက်။
- ၁၉၆၃-၆၆ အထိ ကေအန်ယူ၏ မြေအောက် လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ခဲ့။
- ၁၉၆၂ မှာ သမိုင်းဝင် ၇ ဂျူလိုင် အဖြစ်အပျက်နှင့် ကြုံခဲ့။ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားခဲ့။
- ၁၉၆၁ မှာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်သို့ ရောက်။
- ၁၉၄၅၊ ဇူလိုင် (၅) တွင် မအူပင်ခရိုင်၊ ပန်းတနော်မြို့နယ် အနီးရှိ၊ တော်လှန်ရေးသမား ထွက်သော ကျေးရွာတရွာတွင် မွေးဖွား။
မဇ္ဈိမက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုနေ့က ဖဒိုမန်းရှာကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သော နောက်ဆုံး အင်တာဗျူးကို ပြန်လည်
မေး။ ။ စစ်အစိုးရရဲ့ စနေနေ့က ကြေညာချက်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို တကယ်ပဲ ဦးတည်တာလား။
ဖြေ။ ။ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အာဏာရှင်စနစ် ခိုင်မြဲရေးကို ဦးတည်နေတာ။
မေး။ ။ အခုလို့အချိန်မှာ၊ အားလုံး မမျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာ ကောက်ကာငင်ကာ ကြေညာလိုက်တာ ဘာကြောင်လို့ ထင်လဲ။
ဖြေ။ ။ စက်တင်ဘာလ တော်လှန်ရေးအပြီးမှာ နိုင်ငံတကာက ဖိအားက ပိုများလာတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း သူကို
သိပ်မခံမရပ်နိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့အချက်က ထင်ရှားလာတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ယူအမ်ရဲ့ပါဝင်မှု၊ အဲဒီအပေါ်မှာ
သူတို့သွားနေတဲ့ ရုတ်မက်ပ်ဟာ နိုင်ငံခြားကနေ ဖိအားတွေ မြင့်လာရင်၊ ဝင်လာရင် အတားအဆီး ဖြစ်မှာစိုးတယ်။ နိုဝင်ဘာလ (၁၆)
ရက်နေ့က သူတို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒါကိစ္စက ရှင်းတယ်။ နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ရုတ်မက်ပ်ကို
ဝင်ပြီးနှောက်ယှက်တာကို သူတို့ လက်မခံဘူး။ အဲဒီတော့ သူတို့က သူတို့လမ်းကြောင်းကို သွားတော့မယ်လို့ ပြောလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။
ယူအမ်ရဲ့ ပါတီစီပေးရှင်းကို လက်မခံဘူး။ နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးတာကိုလည်း လုံးဝ လက်မခံဘူး။
မေး။ ။ သူတို့က တကယ်ပဲ ၂ဝ၁ဝမှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်သွားနိုင်သလား ခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲက လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ မရဘူးဗျ။ အရင်တုန်းက ၁/၉ဝ ထုတ်ထားတာ ရှိတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လို
ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ သူတို့ကို ဝိုင်းမေးရမယ်။ အဲဒါကို အကောင်အထည် မဖော်ဘဲနဲ့ သူဟာနဲ့သူ နောက်ထပ် ၂ဝ၁ဝခုနှစ်၊ ၂ဝ၂ဝ တို့
လုပ်ချင်ရာ လျှောက်လုပ်နေလို့ မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်။
မေး။ ။ အရင်ကလည်း လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲတွေကို အကြပ်ကိုင်ပြီး လုပ်ခဲ့တာရှိတော့၊ အခုရော ဒါမျိုးလုပ်လို့ မရနိုင်ဘူးလား။
ဖြေ။ ။ သူတို့လုပ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ မေလ ရွေးကောက်ပွဲမှာတုန်းက သူတို့ တွက်ခြေမကိုက်ဘူး။ မကိုက်တော့ မေလ ရွေးကောက်ပွဲ
ရလဒ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့္ဒNational Convention နဲ့ Roadmap ကို စဉ်းစားတာ ဖြစ်တယ်။ အဲလို ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ဒီတချီမှာတော့
နိုင်လဲနိုင်၊ ရှုံးလည်းနိုင် သူတို့လုပ်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီကိစ္စ္ဂအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးတော့မှ ခိုင်မာတဲ့
တုံ့ပြန်မှု၊ ပြတ်သားတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ ကျနော်တို့ လုပ်ဖို့ လိုတယ်။
မေး။ ။ ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ လက်ရှိ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဘက်က
ရပ်တည်ပြီး လုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
မေး။ ။ လူထုက ဘာတာဝန်တွေ ရှိလာပြီးလဲ ခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ လူထုက အများကြီး လုပ်လို့ရတယ်။ သူတို့က Political Non-cooperation၊ နိုင်ငံရေးအရ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တာ မလုပ်ဖို့၊
စီးပွားရေးအရလည်း လုံးဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ မလုပ်ဖို့၊ လူမှုရေးအရ လုံးဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ မလုပ်ဖို့၊ အဲလို
လက်တုံပြန်ရမယ်။ နိုင်ငံရေး တိုက်ပွဲတွေ၊ လူထု တိုက်ပွဲတွေ၊ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲတွေ၊ နိုင်ငံတကာက နေပြီးတော့ နိုင်ငံရေး
တိုက်ပွဲတွေ၊ နိုင်ငံတကာ ဖိအားတွေ၊ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ မြှင့်တင်ရမယ်။ မဟုတ်ရင် နအဖကဟာ သူတို့ နားလည်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့
သူတို့ကိုပြောမှ။ အရင်တုန်းကလို သူတို့က ချောမြူရေးဝါဒကို ကျင့်သုံးနေတာကြောင့် သူတို့ ဘယ်သူကိုမှ ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://viperbasi.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.